10/29/13 ~ Myanmar Forward
ကမ္ဘာ့အရပ် အရှည်ဆုံး လူသား တူရကီတွင် လက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပ
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ကမ္ဘာ့အရပ်အရည်ဆုံးလူသားအဖြစ် Guinness World Record စာအုပ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ခံထားရသူ ဆူလ်တန်ကိုဆန်သည် ဆီရီးယားသူတစ်ဦးနှင့် တူရကီတွင် အောက်တိုဘာ၂၇ရက်ကလက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပ ခဲ့သည်။
သတို့သားဖြစ်သူဆူလ်တန်အသက်၃၁နှစ်၏လက်ရှိအရပ်မှာရှစ်ပေသုံးလက်ခန့်ရှိပြီးသူ၏မဟေသီဖြစ်သူမာဝီဒီဘိုအသက်၂၀နှစ်၏အရပ်မှာ ၅ပေ ၉ လက်မရှိသည်။
လက်ထပ်ပွဲကို ဆူတန်၏ မွေးရပ်မြေဖြစ်သော တူရကီအရှေ့တောင်ပိုင်း မာဒင်ပြည်နယ်တွင် ကျင်းပခဲ့ သည်။ ဆူလ်တန်က သူသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပျော်ရွှင်ဆုံးလူသား ဖြစ်ခဲ့ပြီဟု မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွင် ပြောကြား ခဲ့ပြီး ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဟာဆာကာမြို့သူ မာဝီက ယခုပျော်ရွှင်မှုသည် သက်ဆုံးတိုင် တည်မြဲ လိမ့်မည် ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဆိုသည်။
ဆူလ်တန်သည် ၂၀၀၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက Guinness Book Record တွင် ကမ္ဘာ့အရပ်အရှည်ဆုံး လူသား အဖြစ် စံချိန်တင် မှတ်တမ်းဝင်စဉ်က သူ၏ အရပ်မှာ ၈ ပေ ၁ လက်မကျော်သာ ရှိခဲ့သည်။ အမေရိ ကန် ဆရာ ၀န်များက သူ၏ အရပ်ထိုသို့ ထိုးထွက်လာခြင်းသည် သူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ဂလင်း အကြိတ် များ မူမမှန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု အဖြေထုတ်ထားသည်။
၂၀၁၀ခုနှစ် သြဂုတ်လက ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တွင် အမေရိကန် ဆရာဝန်များက Gamma Knife ဟု အ မည်ပေး ထားသော ဂါမာရောင်ခြည်ကုထုံးဖြင့် ဆူလ်တန်ကိုကုသပေးခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ပြီးခဲ့သောနှစ်က ဆရာဝန်များက ဆူလ်တန်၏ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားမှုသည် သက်ကြီးအရွယ် ရောက်သည် တိုင်အောင် ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးနေဦးမည်ဟု ဆိုကြသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဆူလ်တန်ကို ဂျိုင်းထောက်ဖြင့် သွားလာရန် သူ၏ ဆရာဝန်များက ညွှန်ကြားထားသည်။
လစ်ဗျားတွင် ဘဏ်ကား ဓားပြတိုက်ခံရမှု ဒေါ်လာ ၅၄ သန်း ဆုံးရှုံးဟုဆို
ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုနေသော ဗင်ကားသည် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာငွေကြေး စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ (၅၄)သန်းထိ သယ်ဆောင်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လစ်ဗျား အစိုးရ သတင်းဌာနများက လက်နက်ကိုင် လူတစ်စုက ဘဏ်ကားတစ်စင်းကို လုယက်ကာ ဒေါ်လာ (၅၄)သန်းမျှ ခိုးယူသွားကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုနေသော ဗင်ကားသည် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာငွေကြေး စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ (၅၄)သန်းထိ သယ်ဆောင်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အနည်းဆုံး လူ(၁၀)ယောက်မျှရှိသည့် သေနတ်သမားများသည် လေဆိပ်မှ ဆာတီမြို့ထဲ မောင်းနှင်လာသည့် မော်တော်ကားကို တားဆီးရပ်တန့်စေကာ လုယက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ငွေကြေးများကို မိုင်(၃၀၀)မျှ ကွာဝေးသည့် မြို့တော် ထရီပိုလီမှ ယူဆောင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ "ဒီဓားပြတွေဟာ လစ်ဗျားတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကပ်ဘေးတစ်ခုလို ပြဿနာပါပဲ"ဟု ဆာတီကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ အက်ဘ်ဒယ်လ်ဖာတား မိုဟာမက်က Reutersသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
လစ်ဗျားသည် ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိသည့် အခြေအနေများ (၂၀၁၁)ခုနှစ် ကတည်းက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ နေရာအနှံ့တွင် သမ္မတ ဘာရှာအာဆက်ဒ်ကို တော်လှန်သည့် လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်မှုများကို တားဆီးထိန်းချုပ်ရန် အစိုးရ အနေဖြင့် အသည်းအသန် ရုန်းကန်နေရသည်။ တနင်္လာနေ့က ဓားပြတိုက်ခံရသည့် ဗင်ကားတွင် လက်နက်ကိုင်အစောင့် တစ်ဦးတည်းပါ လိုက်ပါခဲ့ပြီး ဓားပြ(၁၀)ဦးကို မတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ဟု Lana သတင်းအေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဓားပြများသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂)သန်းနှင့် လစ်ဗျားသုံး ဒိုင်နာငွေကြေး (၅၃)သန်းမျှကို ယူဆောင်သွားကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ကျွန်တော် ထပ်ပြောပါ့မယ်။ အဲဒါလည်း တစ်စက်ကလေးမှ အားငယ်စရာ မလိုပါဘူးခင်ဗျား။ ယောက်ျားေ တွက ဣတ္ထိယတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို စွဲလန်း မက်မောရာမှာ ဘာကို မက်တာလဲ၊ ဘယ်နားလေးကို စွဲတာလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ကျွန်တော် တန်းစီပြီး ချပြပါရစေ။
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
The Voice Daily သတင်းစာ တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် သတင်းထောက်တစ်ဦးအား ဝိုင်းဝန်း ရိုက်နှက်မှု ပျဉ်းမနားမြို့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်မှာ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့ ၁ဝ နာရီခွဲခန့်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အမှုကို ပျဉ်းမနားမြို့မ ရဲစခန်းတွင် (ပ) ၆၉၄/ဝ၃၊ ပုဒ်မ ၂၉၄/၃၂၃ တို့ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခံရသူ သတင်းထောက် ကိုအောင်ထက်သည် မင်္ဂလာရပ်ကွက် သံလမ်းထိပ် ထမင်း ဆိုင်မှ ထမင်းစားပြန်လာချိန် အောင် ချမ်းသာဘုရားအနီးအရောက် စက်ဘီး တစ်စီးကို ၄င်းစီးနင်းလာသည့် ဆိုင် ကယ်ဖြင့်ကျော်တက်စဉ် စက်ဘီးနှင့် ဆိုင်ကယ်ထိမိရာမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စက်ဘီးနှင့် ဆိုင်ကယ် ထိမိရာ စက်ဘီးထိခိုက်မှု ရှိ မရှိ ပြန်လည် လှည့် ကြည့်ပြီး ထိခိုက်မှုမရှိသဖြင့် တောင်းပန် သော်လည်း စက်ဘီးနင်းသူမှာ မကျေ နပ်၍ ၄င်းနှင့် အပေါင်းအပါများက ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် ငွေကြေး တောင်းခံခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထောက် ကိုအောင်ထက်က ပြောသည်။
''တစ်သိန်း၊ တစ်သိန်းခွဲဆိုပြီး တောင်းတယ်။ ပေးမယ်လို့ ပြောတော့ လည်း ထပ်ထိုးတယ်။ စစ်ထွက်တွေလို့ ပြောတယ်။ သူပုန်တွေတောင် သတ်လာ တာ မင်းတို့လို ကောင်မျိုးကတော့ ဆို ပြီး ပြောဆိုပြီး ရိုက်နှက်ကြတယ်'' ဟု ၄င်းက Popular News သို့ ပြောပြ သည်။
ပျဉ်းမနားမြို့မရဲစခန်းမှ ဝိုင်းဝန်း ရိုက်နှက်ခဲ့သူများကို စုံစမ်းရာ တရုတ် ကြီး အသက် (၂၄)နှစ် မြို့ဦးရပ်ကွက်နေ သူနှင့် အမည်မသိ အသက် (၂၅) နှစ် ခန့်၊ အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်နေသူတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပြီး တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သိရသည်။
ယခုအမှုသည် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားတွင် ပထမဆုံး ဖြစ်ပွားသည့် သတင်းထောက်တစ်ဦးအား အုပ်စုဖြင့် ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှု ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under အနုပညာ | No comments
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေ (ဓာတ်ပုံ – မြတ်သူအောင် / ဧရာဝတီ)
ကိုယ်က တကယ်ချစ်ပေမယ့် အချစ်ကို အလိမ်ခံရတဲ့ မိန်းမတယောက် အဖြစ် ဇာတ်ကားတကားမှာ သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကို သိချင်တာတချို့ မေးမြန်းပြီး ဧရာဝတီရဲ့ အနုပညာ ပရိသတ်တွေ အတွက် သူ့အကြောင်းတွေ ကို ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အခု လောလောဆယ်တော့ ခိုင်နှင်းဝေက အိမ်ထောင်ထပ်ပြုဖို့ ကိစ္စကို စိတ်မ၀င်စားသေးဘူး၊ စီးပွားရေးနဲ့ အနု ပညာ အလုပ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အတွက် ဒါတွေကိုပဲ ဦးစားပေးရမယ်လို့ ဟြေပါတယ်။
“အစ်မ လောလောဆယ်တော့ အိမ်ထောင်ထပ်ပြုဖို့ ကိစ္စကို စိတ်ကို မ၀င်စားဘူး။ အခုလောလောဆယ် စိတ်ဝင်စား တာက စီးပွားရေးနဲ့ ကိုယ့်အနုပညာကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ ဦးစားပေးရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဘ၀မှာ ဦးစားပေး ခဲ့တာတွေက အများကြီးပဲလေ၊ အခုတော့ ဖြစ်သင့်တာကိုပဲ ဦးစားပေး ရတော့မယ်လေ။ အမှန်တကယ်တော့ သရုပ်ဆောင် တိုင်းက အပြင်မှာ စီးပွားရေး တခုခုတော့ ရှိကြတယ်” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် လောကဆိုတာ အမြဲတမ်း တက်လိုက် ကျလိုက်ဖြစ်နေတာ တကြောင်း၊ သရုပ်ဆောင် ဆိုတာက ငယ်တဲ့ အရွယ်နဲ့တင် တန့်နေမှာ မဟုတ်ဘဲ တဖြည်းဖြည်း အသက်ကြီးလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘဝရပ်တည်ဖို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တခုခု ရှိထားသင့်တဲ့အကြောင်း ခိုင်နှင်းဝေက ရှင်းပြပါတယ်။
“သရုပ်ဆောင် အလုပ်က ၀ါသနာ အရသာ လုပ်နေရတာ၊ တကယ်တမ်း ဘ၀ရပ်တည်ဖို့ အတွက် ခိုင်မာတဲ့ စီးပွားရေးတခု ရှိဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်ကတော့ အနုပညာ လုပ်ငန်းနဲ့ပဲ စီးပွားရေး လုပ်ရတာ ၀ါသနာပါတော့ ပရိုဂျူဆာ လုပ်မယ်၊ ဒီထဲမှာပဲ ကျင်လည် နေမှာပဲ၊ အောင်မြင်တယ် ဆိုတာကလည်း ၀ါသနာရှိမှ အောင်မြင်တာလေ၊ ၀ါသနာမရှိဘဲ တခြား သွားလုပ်လည်း ကျရှုံးမှာပဲ။ အနုပညာ လောကထဲမှာပဲ အစ်မ ရပ်တည်သွားမှာပါ” လို့ သူက ဟြေပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် အလုပ်ဆိုတာ အလုပ်က သင်သွားတယ် ဆိုပေမယ့် တခါတလေ ဒါရိုက်တာ ဟြေတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ထိုးထွင်းကြံဆ နိုင်တဲ့ ဉာဏ်ပေါင်းပြီး လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ခိုင်နှင်းဝေက နားလည်ထားတာပါ။
“သရုပ်ဆောင် တယောက်က ကိုယ်သရုပ်ဆောင်တာ ဘာလို့လဲ ဆိုတာကို သိပ်မသိကြဘူး။ ဒါရိုက်တာတွေက ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို စိတ်လေးထည့်လိုက်၊ ဘယ်လို မျက်ရည်ကျလိုက် ဆိုပြီး ဟြေပေးတဲ့ အပေါ်မှာ လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ တခါတလေ ကျတော့လည်း အလုပ်က သင်သွားတာပေါ့။ တခါတလေ ဒါရိုက်တာဟြေတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ထိုးထွင်း ကြံဆနိုင်တဲ့ ဉာဏ်နဲ့ ပေါင်းပြီး လုပ်ရတာပေါ့” လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေ အနေနဲ့ သူတယောက်တည်း နေရတဲ့ဘ၀မှာ စိတ်ထွက်ပေါက် အနေနဲ့ ဘုရားတရားကို ပိုလုပ်ဖြစ်နေပြီး အခုအချိန်မှာ ၅၂၈ မေတ္တာ၊ ၁၅၀၀ မေတ္တာတွေရဲ့ ကွဲပြားပုံကိုလည်း သိသွားပြီလို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
“အစ်မ တယောက်တည်း နေရတဲ့ဘ၀မှာ ဘုရားတရား ပိုလုပ်ဖြစ်တယ်၊ အစ်မ အမေနဲ့နေတယ်၊ အိမ်မှာ မွေးထားတဲ့ ခွေးလေးတွေနဲ့ နေတယ်။ ၅၂၈ တွေ အများကြီး ပေါင်းလိုက်ရင် လူတဦး တယောက်ရဲ့ ၁၅၀၀ ထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။ ၅၂၈ နဲ့ ၁၅၀၀ နှစ်ခု ပေါင်းထားတဲ့ ၂၀၂၈ အချစ်ကိုလည်း မလိုချင်ပါဘူး။ အခုချိန်အထိ အနုပညာ အလုပ်တွေလုပ်နေရတာ ပရိသတ်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ပါပဲ။ မင်းသမီးတွေ လည်းအများကြီးပဲ၊ အများကြီး ရှိနေတဲ့အထဲကို ပြန်တိုးဝင်ဖို့က မလွယ်တဲ့ ကိစ္စလေ။ မင်းသမီး အငယ်တွေလည်း မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပရိသတ်က ကိုယ့်ကို လက်ခံပေးတာကိုပဲ တော်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ ခိုင်နှင်းဝေက ဆိုပါတယ်။
အပုပ်နံ့ထွက်မှ သိရှိရသည့် စစ်တွေတက္ကသိုလ်ဆရာမတစ်ဦး သေဆုံးမှု
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under မှုခင်း | No comments
ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေတက္ကသိုလ်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဆရာမတစ်ဦးသေဆုံးနေမှုကို နှစ်ရက်ကြာ မှ တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု စစ်တွေမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ သိရှိရသည်။
စစ်တွေမြို့မ ကျည်းမြိုင်ရပ်ကွက်တက္ကသိုလ်ဆရာ/ဆရာမများအဆောင် တိုက်နံပါတ်(၁)အခန်း(၉)နေ ဆရာမ ဒေါ်လှအုန်း(မြန်မာစာကထိက)၏အခန်းမှ အပုပ်နံ့ရသဖြင့်ဘေးခန်းနေဆရာများက သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း သို့ အကြောင်းကြားရာ အောက်တိုဘာလ၂၇ ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့နယ်ရဲစခန်း၌ တာဝန်မှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ရဲအုပ်ဘိုထင်ကျော်က သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ ဆရာမဒေါ်လှအုန်း သည် အိမ်သာခန်း၌ မှောက်လျက်အနေအထားဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု ရဲစစ်ချက်မှတ် တမ်းအရ သိရသည်။
သေဆုံးသူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဒဏ်ရာတစ်စုံတရာမတွေ့ရှိရဘဲ အလောင်းမှာ ပုပ်ပွနေခြင်းကြောင်း၊ ရဲဆေးစာဖြင့် စစ်တွေဆေးရုံပို့အပ်ခဲ့ရာ သေဆုံးသူဆရာမဒေါ်လှအုန်းမှာ အာရုံကြောပြတ်၍သေဆုံး ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်ချက်မှတ်တမ်းအရသိရသည်။
“သေတာကို မနေ့ကမှသိရတယ်။ သေတာကတော့ နှစ်ရက်လောက်ရှိလိမ့်မယ်၊ အပုပ်နံ့ကလည်းထွက် နေတယ်။ သူမှာ ဘာပြဿနာမရှိပါဘူ။ အာရုံကြောပြတ်လို့ သေတာပါ။ သွေးတိုးရှိတယ်လို့တော့ အရင်က သူပြောဖူး လို့ သိရတယ်’’ဟု စစ်တွေ တက္ကသိုလ်မှ ဆရာတစ်ဦးကပြောသည်။
ဆရာမဒေါ်လှအုန်းသည်အသက်(၅၆)နှစ်ရှိပြီးစစ်တွေတက္ကသိုလ်၌မြန်မာစာကထိကရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပြီး ဆရာ/ဆရာမများအဆောင်တွင် နေထိုင်စဉ်ယခုကဲ့သို့ သေဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်ဆရာမ ဒေါ်လှအုန်း သည် အိမ်ထောင်မရှိ အပျိုကြီးတစ်ယေက်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါသေမှုသေခင်းဖြစ်စဉ်အား ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်းဟုတ် မဟုတ်စုံ စမ်းစစ်ဆေးအရေးယူ ပေးပါရန် ဒုရဲအုပ်ဘိုထင်ကျော်မှ တရားလိုပြအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် စစ်တွေမြို့နယ်ရဲစခန်းမှဒုရဲမှူး (ယာယီ) စခန်းမှူး ဦးမိုးကျော်က လက်ခံစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ဟု စစ်တွေရဲစခန်းမှ သိရသည်။
သီပေါမြို့နယ်တွင် ရှေးဟောင်းစေတီ တစ်ဆူ ပြိုကျ၊ ဌာပနာများထွက်ပေါ်
သီပေါ၊ အောက်တိုဘာ ၂၉။
သီပေါမြို့နယ်၊ နောင်ကတ်ကျေးရွာရှိ ရှေးဟောင်းစေတီတစ်ဆူ ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဌာပနာများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောကြားသည်။
စေတီတော်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှ ပြိုကျခြင်းဖြစ်ပြီး ရှေးဟောင်းဆင်းတုတော် ၁၉ ဆူနှင့် ဌာပနာအိုးတစ်လုံး ပေါ်တော်မူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ည(၁၂)နာရီလောက်က အသံတော့ ကြားလိုက်တယ်၊ မိုးရွာနေတာနဲ့ ထွက်မကြည့်ဖြစ်ကြဘူး။ မနက်(၇)နာရီလောက်မှ ဆင်းတုတော်တစ်ဆူတွေ့တာနဲ့ နောင်ကတ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက ဆရာတော်ကိုခေါ်ပြီးပြရတာ”ဟု နောင်ကတ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောကြားသည်။
ဆင်းတုတော်များအား သီပေါမြို့၊နောင်ကတ်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ခေတ္တစံပယ်တော်မူထားပြီး စေတီတော် အသစ်ပြန်လည်တည်ရာတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်း ဋ္ဌာပနာတော်မူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဒီနေရာကလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ကျော်က အုန်းဘောင်ခေတ် ပျက်ပြီးတော့ ပြောင်းလာတဲ့နေရာပါ၊ သီပေါမြို့ကျတော့ နောက်ပိုင်းမှတည်တာ” ဟု သီပေါဒေသခံတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
ဆင်းတုတော်များအား သီပေါမြို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီဌာနအုပ်ချုပ်ရေမှူး၊ သာသနာရေးဦးစီဌာန တာဝန်ခံနှင့် အခြားတာဝန်ရှိသူများလာ ရောက်လေ့လာ စစ်ဆေးပြီး မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားကြောင်း သိရသည်။
သီပေါမြို့မှာ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မြို့ဖြစ်သည်နှင့်အညီ သမိုင်းဝင် စေတီများပေါများပြီ စေတီအချို့မှာ ပြန်လည်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်လျှက်ရှိနေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
စေတီပြိုပျက်၍ ထွက်ပေါ်လာသော ဆင်းတုတော်များမှာ မြန်မာ သက္ကရာဇ်(၁၂၁၂)ခုနှစ် သက္ကရာဇ်ပါ ဆင်းတုတော်(၂)ဆူ၊ (၁၂၅၀)ခုနှစ်ဆင်းတုတော်(၁)ဆူနှင့် (၁၂၆၉)ခုနှစ်ဆင်းတုတော်တစ်ဆူ ပါဝင်ကာ ကျန်ဆင်းတုတော်(၁၅)ဆူမှာ သက္ကရာဇ် ထင်ရှားမှုမရှိကြောင်း ဆင်းတုတော်များ၏ ဥာဏ်တော်မျာမှာ အနိမ့်ဆုံး(၄.၇၅)လက်မမှ အမြင့်ဆုံး(၁၃.၅)လက်မအထိရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြည်နှင်ဒဏ်ခံ တရုတ်နိုင်ငံသားများ ပတ်စ်ပို့သစ်ဖြင့် ပြန်ဝင်ရောက်ဟုဆို
ဗီဇာစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်သဖြင့် အမည်ပျက် စာရင်းသွင်းပြီး ပြည်နှင်ဒဏ် ခံရသည့် တရုတ်နိုင်ငံသားများ မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်အသစ်ဖြင့် ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာမှုများ ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ လေဆိပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသူ တစ်လလျှင် နှစ်ဦးခန့် ဖမ်းဆီးမိပြီး လေယာဉ်ဖြင့် နေရပ် ပြန်ခိုင်းရခြင်းများ ရှိကာ ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ ခြောက်ဦးခန့် ရှိ ကြောင်း ၎င်းကပြောကြားသည်။
“တရုတ်ကုန်သည်တွေ ဧကထောင်ချီ ငှားပြီးတော့ ဖရဲစိုက်နေတာ။ မန္တလေးတိုင်းထဲမှာ လေးဦးလောက် ရှိတယ်” ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး ဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
အလည်အပတ် ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လာရောက် လုပ်ကိုင်နေသူများ တွေ့ရှိပါက စည်းကမ်းနှင့် မညီသဖြင့် အရေးယူမှု ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စီးပွားရေးဗီဇာဖြင့် အလုပ်လာရောက် လုပ်ကိုင်သူ နိုင်ငံခြားသား ၅၀၀ ဦး ဝန်းကျင်ခန့် ရှိပြီး ပညာရေးလုပ်ငန်း၊ သတ္တု တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံဆိုသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့က အမည်ပျက် စာရင်းဝင်သူ တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်တွင် နေထိုင်လျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ အရေးယူခဲ့သည်။ ယင်းအပြင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကူမင်းလေဆိပ်မှ မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော ခရီးသည်များထဲမှ မြန်မာနိုင်ငံက အမည်ပျက်စာရင်း ကြေညာထားသူ တရုတ်နိုင်ငံသား Mr. Feng Shuiaing ကို စိစစ် တွေ့ရှိရသဖြင့် သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ် ဥပုသ်တော်ရပ်ကွက် ကုသိုလ်တော်ဘုရား တောင်ဘက်မုခ် ရေလယ် ဓမ္မာရုံတွင် တစ်နှစ်ကျော်ကြာမျှ တောင်းရမ်း စားသောက်နေသော တရုတ်နိုင်ငံသားကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနက ၁၉၄၇ ခုနှစ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ၇ (၂) အရ ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း နေရပ်သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် ယခုနှစ် ဇန်ဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လာရောက် လျှောက်ထားသည့် နိုင်ငံခြားသားများတွင် တရုတ်လူမျိုး အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဌာနမှ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under နည်းပညာ | No comments
ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ပါက ကလေးငယ်များ စီးနင်းနိုင်သည့် ကစားစရာ အရုပ် ဆိုင်ကယ်လေးနှင့် တူသည်။ Batman ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများထဲမှ စိတ်ကူးယဉ် မော်တော်ကား Batmobileနှင့်လည်း ခပ်ဆင်ဆင် တူသည်။ သို့သော်လည်း Wazuma V8Fသည် ကစားစရာ မဟုတ်သလို စိတ်ကူးယဉ် ယန္တရား တစ်ခုလည်း မဟုတ်ဘဲ တစ်နာရီ မိုင်(၁၅၀)နှုန်းထိ မောင်းနှင်နိုင်သည့် လေးဘီးတပ် ဆိုင်ကယ်လေး ဖြစ်သည်။
ပေါင်စတာလင် (၁၆၀၀၀၀)မျှ တန်ဖိုးရှိသည့် ယင်းဆိုင်ကယ်လေးကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ အင်ဂျင်နီယာများက ဆက်လက် မွမ်းမံ အဆင့်မြှင့်တင်နေဆဲဟု သိရသည်။ လေးဘီးတပ် မော်တော်ကားလေး၏ အင်ဂျင်ကို နာမည်ကျော် မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီ Ferrariက ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ ထိုဆိုင်ကယ်လေးတွင် 3-litre V8 အမျိုးအစား အင်ဂျင်ကို တပ်ဆင်ထားပြီး (၁၉၇၀)ပြည့်လွန်နှစ်များက လူကြိုက်များခဲ့သည့် Ferrari 308 ပြိုင်ကားမှ အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းကို အခြေခံ ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ Wazuma V8Fကို တာဝန်ယူ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီမှ Lazarethဖြစ်သည်။
Lazarethမှ တာဝန်ရှိသူများက မိမိတို့သည် ယင်းအပေါ့စား ယာဉ်ငယ်လေးကို တစ်နာရီ (၂၅၀)မိုင်နှုန်းထိ မြန်နှုန်းမြှင့်တင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းဆိုင်ကယ်လေးသည် ကီလိုမီတာ (၆၅၀)မျှသာ အလေးချိန်ရှိသည်။ ပြင်သစ် သုတေသီများသည် မြန်နှုန်းနှင့် အလေးချိန် အချိုးအစားကို တစ်တန်လျှင် (၃၈၄)bhp ယူနစ်ဖြင့် တွက်ချက် ဖန်တီးထားသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း Ferrari၏ 458 Spider ပြိုင်ကား တစ်စင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတိုင်း တစ်နာရီလျှင် (၁၅၀)မိုင်နှုန်းထိ မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ပြဿနာ တစ်ရပ်မှ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် အလွန်မြင့်မားနေခြင်း ဖြစ်သည်။ Hondaက ဖန်တီးထုတ်လုပ်သည့် လေးဘီးတပ် ဆိုင်ကယ် တစ်စင်း၏ တန်ဖိုးသည် ပေါင်စတာလင် (၈၀၀၀)မျှသာရှိရာ Wazuma V8Fက အဆ(၂၀)မျှ ဈေးများနေသည့် သဘောဖြစ်သည်။ Wazuma V8F၏ ဈေးမျိုးဖြင့် အဆင့်မြင့် ပြိုင်ကား တစ်စင်းမျှကို ကောင်းစွာ ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်မည့် အခြေအနေ ရှိနေသည်။ Lazarethမှ တာဝန်ရှိသူများကမူ Wazuma V8Fသည် ဒီဇိုင်းပိုင်း ထူးခြားပြောင်မြောက်လှသည့် Masterpiece လက်ရာတစ်ခု ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တန်ဖိုးကြီးကြီး သတ်မှတ်ရန် ထိုက်တန်ကြောင်း ကာကွယ် ပြောဆိုထားသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ ကောက်ခံမည့် ကိစ္စ အသိပေး ကြေညာခြင်း
၁။ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့သည် ဓာတ်အားထုတ် လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဓာတ်အားဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်များ တတ်နိုင်သမျှ ကာမိစေရန်အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုအပေါ်မှ စတင်၍ အောက်ပါ တစ်ယူနစ်နှုန်းထားများအတိုင်း ဓာတ်အား ခနှုန်းထားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်-
(၂) ၁၀၁ ယူနစ်နှင့်အထက် ၅၀ ကျပ်
(ခ) အများပြည်သူ (စက်မှု၊ စီးပွားရေး၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း၊ယာယီ)
(၁) ၁ ယူနစ်မှ ၅၀၀၀၀ ယူနစ်အထိ ၁၀၀ ကျပ်
(၂) ၅၀၀၀၁ ယူနစ်နှင့်အထက် ၁၅၀ ကျပ်
၂။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ပမာဏများအပေါ် အပိုဒ် (၁)တွင် ဖော်ပြပါနှုန်း ထားသစ်များနှင့်တွက်ချက်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစတင်၍ ငွေတောင်း ခံလွှာများ ပြုစုတောင်းခံ သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ဥရောပမြောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၁၁ ဦး သေဆုံး
ဗြိတိန်မိုးလေဝသဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မိုးရေချိန်မှာ ၅၀ မီလီမီတာအထိရှိခဲ့ပြီး နေရာပေါင်း ၁၃၀ တွင် ရေကြီးနိုင်ကြောင်း သတိပေးထား
ဥရောပမြောက်ပိုင်းတွင် တနင်္လာနေ့က အားကောင်းသော မုန်တိုင်းတစ်ခု ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ အနည်း ဆုံး လူ ၁၁ ဦးသေဆုံးပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေားကြန့်ကြာမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည်။ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းကာ လေပြင်းများတိုက်ခတ်မှုအတွင်း ဗြိတိန်တွင် လူ ၄ ဦးနှင့် ဂျာမနီတွင် လူ ၃ ဦးသေဆုံးကြောင်း AFP သတင်းက ပြောကြားသည်။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဒိန်းမတ်နှင့် နယ်သာလန် တို့တွင်လည်း လူအသေအပျောက် ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဥရောပမြောက်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းဒေ သတွင် လေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် ၉၈ မိုင်ကျော်အထိ ပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်း ဗြိတိန်မိုးလေဝသဌာနက ဆိုသည်။
မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဗြိတိန်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့တွင် နေအိမ် ၅၀၀,၀၀၀ ကျော်မှာ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှု ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ မိုးသည်းထန်ပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်နေမှုကြောင့် ကိုပင်ဟေ ဂင် လေဆိပ်၌ ခရီးသည် ၅၀၀ ခန့်မှာ လေဆိပ်အတွင်းသို့ သွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ လေယာဉ် များပေါ်တွင် သောင်တင်နေခဲ့သည်။ မုန်တိုင်းကြောင့် အင်္ဂလန်တောင်ပိုင်း၊ ဒိန်းမတ်၊ နယ်သာလန်နှင့် ဂျာမနီ တွင် ရထားခရီးစဉ်များလည်း ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။ လန်ဒန်ရှိ ဟီးသရိုးလေဆိပ်တွင်လည်း ခရီးစဉ် ၁၃၀ ကို ဖျက်သိမ်း ခဲ့ရပြီး အခြား လေယာဉ်ခရီးစဉ်များမှာလည်း နှောင့်နှောင်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဗြိတိန်မိုးလေဝသဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မိုးရေချိန်မှာ ၅၀ မီလီမီတာအထိရှိခဲ့ပြီး နေရာပေါင်း ၁၃၀ တွင် ရေကြီးနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။ ယခု တိုက်ခတ်သည့် မုန်တိုင်း၏ အမည်ကို ပြင်သစ်တွင် Christian ဟု အမည်ပေးထားပြီး ဗြိတိန်မီဒီယာများကမူ St Jude ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြသည်။ ဥရောပမြောက် ပိုင်းတွင် တနင်္လာနေ့က တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် မုန်တိုင်းမှာ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အဆိုးရွား ဆုံးဖြစ်သော် လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှာမူ ၁၉၈၇ ခုနှစ်က တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့ စဉ်က ထက် နည်းပါးကြောင်း သိရသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်က တိုက်ခတ်ခဲ့သော မုန်တိုင်းကြောင့် ဗြိတိန်နှင့် ပြင်သစ် တွင် လူ ၂၂ ဦးသေဆုံးကာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလျံရှိကြောင်း သိရသည်။
” နောက်ပိုင်းသီချင်းတွေက တဖြည်းဖြည်း Tempo မြင့်သွားမယ်။
အရှေ့ဆုံးမှာတော့တော်တော်ချိုတဲ့သီချင်းလေးကိုထားထားတယ်” လို့ စမိုင်းလ်ကပြောပါတယ်။ New Me စီးရီးထဲမှာ သီချင်းအနှေးလေးတွေအပြင်မြူးကြွတဲ့ သံစဉ်တွေနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ရော့ခ်ဂီတရဲ့ အနှစ်သာရကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စမိုင်းလ်ရဲ့အခွေထဲမှာ သူ့ရဲ့ သမီးလေးအတွက်ခံစားသီဆိုထားတဲ့ “သမီးလေး” ဆိုတဲ့သီချင်းလည်းပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီးဗီနိုထွန်းကရေးစပ် ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ညီလေးဆိုတေး ဒီ အခြေအနေမှာ မင်းနောက်ထပ် အခွေသစ်တွေ၊ သီချင်းအသစ် တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကို မင်းဦး နှောက်ကို အနားပေးတယ်လို့ပဲ သဘောထားပါ။အဓိက အချက် ကတော့ငွေနောက်မလိုက်နဲ့ တော့။ နေပြန် ကောင်းသွားလို့ အလုပ်ပြန်လုပ်တော့ မယ်ဆိုရင် အရင်တုန်းက အဆို တော်မဖြစ် ခင်က ကိုယ်ကြိုးစားထားတဲ့ အ ရာတွေကို ရအောင်လုပ်ပါလို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဆုံးမစကား ပြောပေးခဲ့ပါတယ်။သူက ကျွန် တော့်ကိုကန်တော့တော့ စကား ပြောပေးခဲ့တာပါ။ ဒီအခွင့်အ ရေးကို အတွေ့အကြုံလို့ အသုံး ချပြီးတော့ ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့ သီချင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင် အောင်ကျွန်တော်ဆိုတေးကို သူ့ အခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း မေးပါ တယ်။ သူပြောပြ ပါ တယ်။ ဒုတိယ အခွေအတွက် သီချင်း တွေပြီးပြီလို့ပြောပြတယ်။ပရိ သတ်တွေအနေနဲ့သူ့ရဲ့ ဒုတိယ မြောက်အခွေကို နား ထောင်ရ တော့မှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သူ တီးထားအပ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေကိုသူ့ဆီမှာ ဘယ် နှစ်ပုဒ်ရှိလဲ။ဘယ်သူ့ဆီမှာ ဘယ်နှစ် ပုဒ်ရှိလဲဆိုတာတွေကို အကုန်လုံးမှန်းပြီးသီချင်းကို ပြန်လိုက်စုပြီးသူ့ရဲ့ ဒုတိ ယ မြောက်အခွေကိုထွက်နိုင် အောင်ကြိုးစားပေးမှာပါ” လို့ပြောပါတယ်။
” ဝိုင်းစုက တစ်လပိုင်းကို အခွေထွက်ဖို့လုပ်ထားတာဆို တော့ သူမမီလောက်ဘူး ထင်တယ်။ သူနဲ့ဆိုထား တဲ့ သီချင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်း စားနေတုန်းပဲ။ သူ က သီချင်းဆိုဖို့လောက်တော့ အားမ ရှိသေး ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေကတော့ တအားပြန် ကောင်းသွား ပြီ။ အားလုံးလည်း သူ ပြန်မှတ်မိ တယ်။ ပြောနိုင် တယ်။ သူပျော် လည်းပျော်တယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် နေ့က ဆိုတေးရဲ့ နေအိမ်ကို ဟဲလေး၊ အစ္စဏီ၊ ဒီယံ၊ Wai လျှံ၊ စစ်သွေးတို့ကလည်း သွားရောက်တွေ့ဆုံ သတင်း မေးခဲ့ ပါ တယ်။ ဆိုတေးကိုသွား ရောက်တွေ့ ဆုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟဲလေးက ” ဆိုတေးနဲ့က သူဘာမှ မအောင်မြင်ခင်ကတည်းက ကျွန်တော် နဲ့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ ညီတစ်ယောက်လိုပဲ။
သွားတွေ့ ခဲ့ကြတဲ့ အစ္စဏီတို့၊ Wai လျှံ တို့၊ ဒီယံတို့၊ စစ်သွေးတို့ဆို တာတစ်ဖွဲ့တည်းသားလို့ ပြော လို့ ရတယ်။ မနေ့က ဝိုင်းစု နဲ့ဖုန်းရတော့ သွားကြည့် ဖြစ် တာ။ အမှန် ကတော့ ရန်ကုန် မှာ ရောက်နေပြီ လို့ကြား တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးရုံမှာပဲထင်တာ။ အိမ်ကို ပြန် ရောက်ပြီဆိုတော့ အဆင်ပြေ သွားတာပေါ့။ အခုလိုမျိုး အားနည်းနေ တဲ့အချိန်မှာ သွားအားပေးတဲ့သဘောပါ။ အရင်ကတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ” အဝေးရောက်ချစ်သူ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလို ရှေ့လျှောက်သီချင်း တွေတွဲ လုပ်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော် သူ့ ကို ပြောဖြစ်တယ်။ ” ဆိုတေး ညီလေး ငါတို့ အဝေးရောက် ချစ်သူဆိုတဲ့ သီချင်းလေး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့။ လက်ရှိ မင်းရဲ့သစ္စာဆိုတဲ့ သီချင်းလေး လည်း အောင်မြင်နေ တယ်။ နောက် ထပ်သီချင်းတွေလည်း ဆက်လုပ်ကြမယ်။ အဓိကက ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်၊ အင်အား တွေရှိလာအောင် အကောင်းဆုံးအနားယူ” လို့ပြောခဲ့တယ်။ အခြေအနေကောင်းပါတယ်။ ဟဲလေးဆို ဟဲလေး၊ Wai လျှံ ဆို Wai လျှံ မှတ်မိတယ်။ သူအဆိုတော်မဖြစ်ခင် ရပ်ကွက်ရှိုးလေးမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ “ပတ်သက်ခွင့် ပြုပါ” သီ ချင်း ကို သူနဲ့ဆိုတယ်။ အခုသူက အဲဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ ပြောင်းနေတာ။ အဲဒါ သူ့ကို ပြန်ပြောပြတော့ အမှတ်ရတယ်” လို့ ပြော ပါ တယ်။
စီအိုင်ဒီမှ စစ်ဆေးပြီးသည့် ၁၀၀၀ ကျပ်တန်အတု လှည့်လည် သုံးစွဲနေသည့် ကိစ္စ စစ်ဆေးနေ
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under သတင်းများ | No comments
စီအိုင်ဒီ(မှုခင်း စုံစမ်းရေးဌာန)မှ စစ်ဆေးပြီး ငွေစက္ကူ အတုဟု တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထားသည့် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူမှာ ပြည်သူများလှည့်လည် သုံးစွဲနေသည့်ငွေများအကြား ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့်အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေရကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့ထုတ် Daily Eleven သတင်းစာ ၏ “ပြည်သူတွေက ပေးတဲ့စာ” ကဏ္ဍတွင် မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်နေ ကော်ဖီနှင့် စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသူ ဒေါ်မေပပသွယ်မှ ကျပ် ၁၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူအား စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်က ရရှိခဲ့ကြောင်း ပေးပို့ခဲ့သည့်အတွက် သက်သေဖြစ်သည့် ငွေစက္ကူအတုနှင့် တကွ ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ငွေစက္ကူတွင် စစ်ဆေးရေးဌာန တစ်ခု၏ တစ်ဆိပ်တုံး၊ ငွေစက္ကူအတုဟူသော တံဆိပ်တုံး၊ လက်ရေး မှတ်ချက်၊ နေ့စွဲများ ပါဝင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေစက္ကူအတုများ စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက စီအိုင်ဒီ သို့ တင်ပြရပြီး စီအိုင်ဒီ၏ ငွေတုဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်၊ တံဆိပ်တုံးများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ရကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့ ငွေစက္ကူ အတု စစ်ဆေးချက်အပြည့်အပြည့်အစုံဖြင့် ဖေါ်ပြထားသည့် ငွေစက္ကူအတုမှာ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းစသည့် အနေအထား တစ်ခုတွင် ရှိမနေပဲ ပြည်သူများအကြား လှည့်လည် သုံးစွဲနေမှုအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့၍ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ သိရသည်။
“ဒါက ထူးခြားဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေစက္ကူ အတုပါ” ဟု ဗိုလ်ဆွန်ဝက်လမ်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ခွဲမှ လုပ်ငန်းအရာရှိ ဒေါ်ဖြူဖြူဆွေက အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်က အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“ငွေစက္ကူ အတုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှုတော်တော်များများ လိုက်ဖူးပါတယ်။ လုပ်ငန်းသဘောအရဆိုရင် စီအိုင်ဒီလက်ထဲ ရောက်သွားရင် အရေအတွက်၊ ပုံသဏ္ဍာန်စတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ရှာဖွေပုံစံနဲ့ သိမ်းတာပါ။
ဒီလိုသိမ်းထားပြီးပြီ ဆိုရင် ဓါတုဗေဒဌာနတို့၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတို့၊ ဘိလစ်စာရေးတို့ လက်ထဲမှာပဲ ရှိနေပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းနဲ့ အဆုံးသတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လုပ်ရမယ့် ငွေတုတစ်ရွက်က ပြည်သူတွေကြားထဲ ပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ မရှိသလို ဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက အခုဆို ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလမှ ငွေစက္ကူအတုပြဿနာ ထပ်ဖြစ် လာတာကတော့ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းပါတယ်” ဟု Purple Equity Law Firm မှ ဦးဖိုးဖြူက သုံးသပ်သည်။
ယခုလအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူ အတု ရွက်ရေ ၈၀၀၀ ကျော် မိသည့် ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အလားတူပင် စက်တင်ဘာလအတွင်း ကလည်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်တွင် ငွေစက္ကူအတု ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အချစ်ရဲ့  အလှ အချစ်ရဲ့  အရသာ
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under ရသ | No comments
သူ အိပ်ပျော်သွားပြီ။သို့မဟုတ်လည်းသူ အိပ်ပျော်လုဆဲဆဲ ဖြစ်နေပြီ။
ကျွန်မ ပန်းချီဆွဲချင်သည်။ကျွန်မအတွက်ကိုယ်ဟန်ပြပေးဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ သဘောမတူခဲ့သော
ယောက်င်္ကျားသည် ယခုအခါ ပန်းချီဆွဲခံရန်အကောင်းဆုံးကိုယ်ဟန်အနေအထားဖြင့် အဆင်သင့်ရှိနေပြီ။ အနီးမှာလည်း ထောင်စင်မှာ ချိတ်ထားသောအဖြူရောင်းကင်းဘတ်စ်က အဆင်သင့်ရှိနေသည်။ ကျွန်မ လိုအပ်သမျှမှာ အိပ်ရာပေါ်မှထထွက်လာပြီး ကင်းဘတ်စ်ရှေ့မှာ ထိုင်လိုက်ရုံပဲဖြစ်သည်။သို့သော် ကျွန်မသည်စိတ်ထဲကသာ ရွေ့လျားလျက် တကယ့်ကိုယ်ခန္ဓာက သည်အတိုင်း လဲလျောင်းနေမိသည်။
ပန်းချီစုတ်တံကို ကိုင်ရမည့်ကျွန်မ၏ညာလက်သည် သူ့ပခုံးစွန်းပေါ်မှာ ပက်လက်တင်လျက်ရှိသည်။ လက်ချောင်းကလေးတွေ၏ အပြင်ပိုင်းသည်သူ့ပခုံးစွန်းကို ထိကပ်လျက်ရှိသည်။ သူ့ပခုံးစွန်းသည် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ချောမွေ့နေ၏။ နောက်ပြီး ချွေးစို့ပြီး အေးစက်စွာနူးညံ့နေသည်။ထိုနူးညံ့အေးစက်သည့် အတွေ့ကလေးထံမှ ကျွန်မ မခွာချင်ပါ။ အနည်းဆုံး ကျွန်မ၏ လှုပ်ရှားမှုကြောင့်တော့မခွာချင်။ ခဏကြာလျှင် သူ ဟိုဘက်သို့ စောင်းပစ်တော့မည်။
အဲ့သည်အခါကျမှပဲ ကျွန်မလက်နှင့်သူ့ပခုံးစွန်း ဝေးကွာချင် ဝေးကွာပါစေတော့။
သူ့ညာဘက်လက်က သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်နေသည်။ ခေါင်းက ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ မရှိဘဲ မွေ့ရာနှင့် ခေါင်းအုံး၏ အစပ်မှာ ရှိသည်။ထို့ကြောင့်ခေါင်းငဲ့စောင်းလျက်ရှိသည်။ ထိုအခါ ကိုယ်ခန္ဓာသည် ပန်းပုရုပ် တစ်ခုလိုပင် ပြေပြစ်စွာလိမ်နွဲ့လျက်ရှိသည်။ အဲ့သည့် ကိုယ်ခန္ဓာသည် ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်၏ ကင်းဘတ်စ်ရှေ့တွင်ငြိမ်သက်စွာတည်ရှိနေသည်ဆိုတော့ပန်းချီဆွဲရန်ဘယ်လောက်အဆင်ပြေလိုက်ပါသလဲ။ထိုအတွေးမျိုး ကျွန်မတွေးမိသည်မှာ လပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း အိပ်ရာမ၀င်မီကင်းဘတ်စ်ကို အဆင်သင့်ရွှေ့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုထိအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့ပါ။
လူတစ်ယောက် အိပ်ပျော်နေစဉ်သူ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ပန်းချီဆွဲခြင်းသည် ထိုသူ၏ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖျက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။သည်လိုပဲ ကျွန်မခံစားရသည်။ ထိုသူက ပန်းချီဆရာ၏ ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်နေစေဦး
တော့၊ ဤအချက်နှင့် အကျုံးဝင်သည်ဟုကျွန်မထင်သည်။ ဘောင်ကြပ်ထားသော ကင်းဘတ်စ်အလွတ်ကို
အိပ်ရာဘေးမှာထားသည့် ပထမဆုံးညတုန်းကသူ ကျွန်မကို မယုံသင်္ကာဖြင့် မေး၏။
̒ အဲဒါကြီးက ဘာလုပ်ဖို့လဲ̓
ကျွန်မ မလိမ်မညာဘဲ အမှန်အတိုင်းဖြေခဲ့သည်။
̒ ရှင်အိပ်ပျော်သွားရင် ရှင့်ကိုပန်းချီဆွဲမလို့ ̓
̒ ဟာ . . . . ဒီမိန်းမ ̓
̒ ကျွန်မ ရှင့်ကို ပန်းချီဆွဲချင်နေတာကြာလှပြီ ̓
̒ မဆွဲရပါဘူး ̓
̒ ဆွဲမှာပဲ၊ ရှင့်ကို ကျွန်မပိုင်တယ်̓
̒ မင်း ငါ့ကို အဲ့ဒီနည်းမျိုးနဲ့မပိုင်ပါဘူး ̓
̒ ပိုင်တယ် လင်မယားဆိုတာတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဘာမဆိုပိုင်တယ် ̓
̒ မင်း ငါ့ကိုတခြားကိစ္စသာပိုင်ချင်ပိုင်မယ်၊ ပန်းချီဆွဲခွင့်တော့ မပိုင်ဘူး ̓
̒ အေးလေ . . . ပိုင် မပိုင်ကြည့်သေးတာပေါ့ ̓
အဲ့သည်နေ့က သူ့ခမျာ ချက်ချင်းအိပ်ပျော်တတ်သူဖြစ်ပါလျက်အိပ်မပျော်အောင် ဇွတ်အတင်း ထိန်းချုပ်ထား
ရသည်။ မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားပြီးဘယ်လောက်မှမကြာမီ လန့်နိုးလာခဲ့၏။ သူ့ဘေးမှာ လဲလျောင်းနေဆဲဖြစ်သော ကျွန်မအား အိပ်ချင်မူးတူးမြင်သွားသောအခါစိတ်ကျေနပ်စွာ တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး သူ့ခေါင်းကိုပြန်ပစ်ချကာ အိပ်ပျော်သွားသည်။သူသည်ပန်းချီဆွဲခံရန် တော်တော်မနှစ်မြို့သူပါကလားဟု အဲသည့်ညကမှကျွန်မ သိသွားခဲ့ရပါသည်။ကျွန်မယောင်္ကျားသည်ရုပ်ရည်ချောမောသူ မဟုတ်ပါ။ သူ့ရုပ်ရည်က အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းသည်ဟုပင်ပြောနိုင်ပါသည်။ မျက်လုံးကကျွန်မငယ်စဉ်က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည့် ချစ်သူတစ်ယောက်၏ မျက်လုံးတွေလိုမည်းနက်စူးရှခြင်းမရှိ။ညိုသည်ဆိုရုံလေး ညိုသည့် ကြည်လဲ့လဲ့မျက်လုံးများ ဖြစ်သည်။ မျက်တောင်ကလည်းခပ်ပါးပါး၊နှာခေါင်းက နှာတံမြင့်ပြီး နှာအိုးကြီးသည်။ ပါးစပ်က ကျယ်ကျယ်၊ ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းတွေဘာတွေစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးသော ကျွန်မသည် ဘာဖြစ်လို့ နှုတ်ခမ်းအရောင်နှင့် အသားအရောင် တစ်ညီတည်းဖြစ်နေသောသူ့ကို ချစ်မိခဲ့ပါလိမ့်။
သူကတော့ ကျွန်မကို မယုံသင်္ကာဖြင့် မေးတတ်သည်။
̒မင်းဟာ ငါ့ကို ချစ်လို့ယူခဲ့တာမှဟုတ်ရဲ့လား၊ ပန်းချီဆွဲခံမယ့် မော်ဒယ်လ်အဖြစ် အပိုင်ဝယ်လိုက်တာများလား ̓
နေရာတကာ သူ့အားပန်းချီဆွဲချင်နေသောကျွန်မကို သူ မယုံသင်္ကာဖြစ်မည်ဆိုလည်း ဖြစ်စရာပါပဲ။
ကျွန်မသည် သူ မီးဖိုမှာ ချက်ပြုတ်လုပ်ကိုင်နေသည်ကိုလည်းပန်းချီဆွဲဖို့ ကြိုးစားဖူး၏။ ဘယ်သူမှ မသိသောလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမှာ သူ ဟင်းချက်အလွန်ကောင်းသည်။သူမီးဖိုချောင် ၀င်နေသည့်အခါ ကျွန်မ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ မကြာခဏ စောင့်ကြည့်ဖူးသည်။ အဲ့ဒါတကယ့် ပန်းချီးကားတစ်ချပ်ပဲ ဖြစ်၏။ ကျွန်မအရပ်နှင့်
တိုင်းပြီး ချုပ်ထားသော ခါးစည်းအ၀တ်သည်သူနှင့် တော်တော်ကြီးကို တိုနေ၏။ ထိုခါးစည်းကို သူစည်းသည့်အခါ အနီကွက်အဆင်အသွေးသည်ထွားကျိုင်းသော ယောင်္ကျားကြီးနှင့် ကိုးရို့ကားယားကြီး ဖြစ်နေတော့သည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်မြင့်ဖူးသည့်အခါ ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်မိပါသည်။
မိတော့သည်။ကျွန်မ မီးဖိုချောင်ကနံရံကပ် ဗီရိုအမြင့်များသည် ကျွန်မအတွက် ခုံနှင့်တက်၍ ဖွင့်ကိုင်ရ ပစ္စည်းယူရပေမယ့်သူ့အတွက်တော့သူ့အရပ်နှင့် တိုင်းထားသလိုပဲ ကွက်တိဖြစ်နေသည်။ ဗီရိုတွေ ဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက်၊ လက်ဆေးကန်ဆီသွားလိုက်၊မီးဖိုဆီသွားလိုက်၊ အသီးအရွက်တွေကို လှီးချွတ်လိုက် ရေဆေးလိုက်နှင့်သူအလုပ်ရှုပ်နေပုံမှာတော်တော်ခမ်းနား၏။ သူချက်ပေးသော ပထမဆုံးဟင်းကို စားပြီးသည့်အခါ သူမီးဖိုချောင်ဝင်လျှင်ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်အတွက် ပိုအဆင်ပြေမည်ဟု ကျွန်မတို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတော့သည်။
ယခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ကျွန်မအိပ်မပျော်တတ်သည်မှာကျွန်မ၏ အားနည်းချက်ပဲဖြစ်သည်။
ယခင်ကတော့ ညအိပ်မပျော်လျှင် ကျွန်မ ပန်းချီကားတွေဆွဲလို့ပြီးစီးတတ်သည်။ အိပ်မပျော်ခြင်းအတွက် ကျွန်မဘယ်တုန်းကမှ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ခဲ့ပေ။အခုတော့အနေအထားတွေအားလုံး လွဲကုန်ပြီ။ သူ့အား ပန်းချီဆွဲဖို့စိတ်ကူးသည့် အချိန်မှစပြီး ညတွေညတွေမှာ ပန်းချီမဆွဲနိုင်တော့တာပဲ ဖြစ်သည်။သူ့ကို ပန်းချီမဆွဲရမချင်းလည်း ကျွန်မနေလို့ထိုင်လို့ဖြောင့်မှာ မဟုတ်ဘူး ထင်သည်။ ကျွန်မသည် ငယ်စဉ်ကတည်းက လုပ်ချင်သည့်အလုပ်တစ်ခုခုကို မလုပ်ရလျှင်စိတ်သည် လွတ်လပ်မှုမရှိဘဲ တစ်ခုခုနှင့်ငြိနေသလို ခံစားရသည်။ ယခုလည်း ကျွန်မသည် သူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ငြိနေသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
ကိုယ်ဟန်ပြမော်ဒယ်တစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ်အတွက်လား . . . ..ကျွန်မ မသိပါ။ကျွန်မ သူ့ကို ချစ်သည်။ သူသည် တရားသူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်မဘ၀အတွက် ငွေကြေးကအစ လုံခြုံမှု ရှိကောင်းရှိနိုင်တာလည်း မှန်သည်။ သူ၏ ကြမ်းတမ်းသောရုပ်ရည်နှင့်နူးညံ့သော မျက်လုံး၊ နူးညံ့သော အပြုံးတို့၏ တွဲဖက်မှုကို ကျွန်မ တအံ့တသြစိတ်ဝင်စားမိတာလည်းမှန်သည်။
စားပွဲတင်မီးအုပ်ဆောင်းမှ ဖြူပြာပြာမီးရောင်သည် သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုဖြာကျလျက်ရှိသည်။ပျော့အိသော ခေါင်းအုံးနှင့် စောင်းငဲ့နေသော သူ့မျက်နှာ၊ အချစ်ဖြင့်စိုလက်သော သူ့လည်တိုင်၊ သူ့ပခုံးစွန်း၊ညာဘက်လက် တင်ထားသော သူ့ရင်ညွှန့်ပိုင်း၊ သူ့ခါးဆီတွင်တစ်ပိုင်းတစ်စ ပြေလျော့စွာတင်နေသောဖြူဖွေးသည့်ချည်စောင်ပါးပါး၊ဤအရာအားလုံးသည် ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်
ရှေ့တွင် ပြည့်စုံသောအနုပညာဖြစ်သည်။ထိုအနုပညာကို မြင်ရသည့်အချိန်တိုင်းမှာ ပန်းချီအဖြစ် ကင်းဘတ်စ်အပေါ် တင်ချင်စိတ်ဖြင့်စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်မိသည်။ သူ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ပန်းချီဆွဲခံဖို့ ခွင့်ပြုလာပါလိမ့်မည်။အိမ်ရှေ့လမ်းမှာဆိုင်ကယ်တစ်စီး မောင်းသွားသံကြားရသည်။ထို့နောက် ပတ်ဝန်းကျင်သည် တိတ်ဆိတ်သွားပြန်၏။ကျွန်မသည် ဖွင့်ထားသော မျက်စိကို အသာမှိတ်လိုက်သည်။ ကျွန်မ အိပ်ပျော်ဖို့ ကြိုးစားတော့မည်။
ထိုအချိန်မှာအရောင်များကို စတင်မြင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အနီရောင်ရင့်ရင့်စိုစို၊ ထိုအရောင်ကို ပထမတော့သွေးဟု ထင်လိုက်သေး၏။ သို့သော် သွေးမဟုတ်ပါ။စိုစွတ်သည် မှန်၏။ စေးပျစ်သည် မှန်၏။ သို့သော်သွေးမဟုတ်ပါ။ သူ့လက်ထဲမှာ ရဲနေအောင်စွန်းထင်းနေသောအရာသည် သွေးမဟုတ်လျှင် ဘာပါလိမ့်။သူပြုံးနေသည်။ ရဲရဲနီစွာ စေးပျစ်သောအရာဖြင့် စွန်းထင်းနေသော လက်ညှိုးကို ကျွန်မဆီသို့ညွှန်လိုက်၏။ ထိုအရောင်သည် မွှေးပျံ့သော ရနံ့ရှိသည်။ ထိုလက်ညှိုးသည် ကျွန်မနှုတ်ခမ်းနှင့်လာထိ၏။ ကျွန်မပြုံးမိသည်။အဲ့ဒါ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်လည်း ပါသည်။
̒အစ်ဇာဘယ်လ်အာလန်ဒေးကပြောတယ် မိန်းမရဲ့၊ တကယ်ကောင်းတဲ့ ဆော့စ်ဟာ အမြင်
အားဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိရမယ်တဲ့၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာလို ကိုယ့်မျက်လုံးတွေကို ညှို့ငင်နိုင်ရမယ်ပေါ့ကွာ၊ နောက်ပြီးအရသာကလဲ အနမ်းတစ်ခုလိုပဲ ချိုမြိန်ရမယ်တဲ့၊ နောက်ပြီး ဆော့စ်ရဲ့ စေးပျစ်တဲ့အရည်ဟာ နူးညံ့ချောမွေ့ရမယ်၊သူ့ရဲ့ အနံ့ကလဲ ပျံလွင့်ကူးစက်မသွားနိုင်အောင် ထူးခြားတဲ့ သီးသန့်အနံ့ရှိရမယ်တဲ့၊ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အသားအရေပေါ်က အနံ့မျိုးပေါ့ ̓
သူ စိတ်လိုလက်ရ ပြောနေသည်။
̒ မီးဖိုထဲမှာ ချက်ပြုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဝါသနာပါတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ယူရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မဖြင့်
ကျွန်မ တအံ့တသြ ပြောမိသည်။
̒ အာရှတိုက်သားတွေကလွဲရင်ယောင်္ကျားတွေ တော်တော်များများ မီးဖိုချောင်နဲ့ ရင်းနှီးပါတယ်ကွ ̓
ဟုတ်တယ်၊ မီးဖိုချောင်နဲ့ကရင်းနှီးတဲ့ ယောက်င်္ကျားတွေဟာ ချစ်စရာလည်း သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ထိုစကားကို
ကျွန်မစိတ်ထဲကသာ ပြောမိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မ အိပ်ပျော်သွားလို့ပဲ ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ကျွန်မသည် အစိမ်းရောင်များဆီသို့လွင့်မျောပါသွားသည်။ ကျယ်ပြန့်သော မြင်ခင်းပြင်ကြီးများ
ဖုံးလွှမ်းနေသည့် တောင်ကုန်းမြင့်များဖြစ်သည်။ထို့နောက် တောအုပ်စိမ်းစိမ်းများ၊ ထို့နောက် စိုက်ခင်း စိမ်းစိမ်းများ၊ ထိုမှတဆင့်ကျွန်မသည် လွင့်မျောသွားကာ တစ်နေရာတွင် အဆုံးသတ်သွား၏။ ထိုနေရာသည်
သူ့ရင်ခွင်ဖြစ်သည်။ သူ့ရင်ခွင်သည်ဘာဖြစ်လို့ အစိမ်းရောင်တွေ ဖြစ်နေရတာလဲ။ လတ်ဆတ်သော၊ စိုစွတ်
သော၊ နူးညံ့သော အစိမ်းရောင်။
̒ ရှင်က ဘာဖြစ်လို့ အစိမ်းရောင်ကြီးဖြစ်နေရတာလဲ ̓
̒ မင်းအတွက် အမြဲတမ်း အာဟာရဖြစ်စေဖို့ကိုယ့်ရင်ခွင်က အစိမ်းရောင်စိုက်ခင်း ဖြစ်နေရမှာ မဟုတ်လား ̓
̒ စိုက်ခင်းလား၊ ဒါဆို ကျွန်မခူးလို့ရတာပေါ့နော် ̓
ကျွန်မ မုန်ညင်းရွက်ကို ကြိုက်သည်။ကိုက်လန်ကို ကြိုက်သည်။ ပဲရွက်ကို ကြိုက်သည်။
နံနံပင်ကို ကြိုက်သည်။ အားလုံးအစိမ်းရောင်။ သို့သော် ကျွန်မ စတော်ဘယ်ရီသီးကိုလည်း
̒ ဒီလိုပဲ တစ်သက်လုံး စိမ်းနေမှာလားဟင်̓
ကျွန်မ မေးမိသည်။ သူကပြုံးသည်။
̒ စိမ်းလည်း စိမ်းတယ်၊ ၀ါလည်းဝါတယ်၊ နီလည်း နီတယ်၊ ဒါက မင်းကို ထားတဲ့အချစ်ကသာ
ဟုတ်ပါရဲ့။ အရောင်ဆိုတာ တစ်ရောင်ကနေတစ်ရောင်သို့ ပြောင်းရတာ မလွယ်ကူပါ။ သူ့ရင်ခွင်ကတော့
ကျွန်မအတွက်ဆို စိမ်းရာမှဝါ၊ ၀ါရာမှ နီ၊ နီရာမှလည်း ဖြူနိုင်ပါသတဲ့။
̒ စမ်းကြည့်မယ် ̓
̒ စမ်းကြည့်ပေါ့ ̓
ကျွန်မ သူ့အား အသံမထွက်ဘဲစိတ်ထဲကသာ ပြောလိုက်၏။
̒ စတော်ဘယ်ရီတွေ ဖြစ်ပေးနိုင်မလား. . . . ကဲ ̓
ကျွန်မလက်နှင့် ထိမိသော သူ့ရင်ညွှန့်သည်နွေးထွေးကာ နူးညံ့သည့် စတော်ဘယ်ရီသီးလေးများ
ဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်မသည် ကလေးတစ်ယောက်လိုပင်တအံ့တသြ ရယ်မောပျော်ရွှင်မိသည်။
̒ ကြည့်စမ်း . . . . သိပ်လှတာပဲ၊စားလို့ သိပ်ကောင်းမှာပဲနော် ̓
̒ အဲ့ဒါ အချစ်ပဲ ̓ တဲ့ .. .
̒ အချစ်ဆိုတာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုတစ်ခုခု စိတ်အရသာ ကိုယ်အရသာ၊ စိတ်ပြည့်စုံမှု ကိုယ်ပြည့်စုံမှု ပေးနိုင်မှ
အချစ်ဖြစ်တယ် ̓ ကျွန်မ၏ ပါးစပ်ထဲသို့သူက စတော်ဘယ်ရီတစ်လုံး ခွံ့ကျွေးသည်။ ဘုရားရေ . . . .။
ကျွန်မစားဖူးသမျှ စတော်ဘယ်ရီသီးများအနက်သူ့ရင်ခွင်မှ ထွက်သောအသီးက စားလို့အရသာ
အရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ရနံ့ကလည်းထူးခြားစွာ မွှေးပျံ့နေသည်။ အရသာကလည်း အချဉ်နှင့် အချိုကို မျှတစွာ
ရောစပ်ထားသည့် အရသာ။ နူးညံ့လိုက်သည်ကလည်းကျွန်မ၏ နှုတ်ခမ်းဖျား လျှာဖျားမှာ ဘယ်တုန်းကမှ
̒ မင်း ကျေနပ်ရဲ့လား ̓
̒ အဲ့ဒါကို မင်းက ပန်းချီဆွဲချင်စိတ်ပေါ်သလား ̓
̒ ဘာကိုလဲ ̓
̒ စတော်ဘယ်ရီသီးကို မင်းစားလို့အရသာကို သိပ်ကျေနပ်နေတဲ့အချိန်မှာ မင်း စတော်ဘယ်ရီသီးကို
̒ ဟင့်အင်း . . . . စားချင်နေတာပဲ̓
̒ အဲ့လိုပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့̓
သူ့အမူအရာကို ကြည့်ရသည်မှာပြဿနာ၏ အဖြေတစ်ခုခုကို ရသွားသလိုပဲ။ ဘာလဲတော့ ကျွန်မမသိပါ။
̒ ဒါပေမယ့် ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ကသူ့မျက်လုံးကို ဆွဲဆောင်သမျှ အရာအားလုံးကို ပန်းချီရေးချင်တာပဲ ̓
̒ အဲ့ဒါ ဘာကြောင့်လဲ ̓
̒ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းသားသလို ပန်းချီကားအဖြစ် လွှဲပြောင်းသိမ်းဆည်းထားချင်
လို့များလား၊ ဒါ . . . .တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုလဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ အလှကို ကိုးးကွယ်တဲ့ သဘော၊
စိတ်အာရုံနဲ့ ကိုးကွယ်သလိုကိုယ့်ရဲ့ အနုပညာနဲ့လဲ ကိုးကွယ်တဲ့ သဘောထင်တယ် ̓
̒ ကိုယ်မင်းကို မေးမယ်၊ အဲ့ဒီလိုပန်းချီအဖြစ် ပြောင်းလဲခံစားလိုက်ပြီးရင် မင်းရင်ထဲမှာ ပေါ့သွားမှာပေါ့ ̓
̒ ပေါ့သွားတာပေါ့၊ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာလုပ်လိုက်ပြီးပြီပဲ ̓
̒ ဒါဖြင့် မင်းရဲ့စိတ်အာရုံကဒီမူရင်းအရာပေါ်မှာ သိပ်တွယ်မငြိတော့ဘူးပေါ့ ̓
သူ ဘာပြောချင်ပါလိမ့်။ သူပြောချင်တာကိုကျွန်မသိနေသလိုပဲ။
̒ ရှင် ဘာကို ပြောချင်တာလဲ̓
̒ ကိုယ်က မင်းကိုယ့်ကို နည်းနည်းမှမလျှော့ဘဲ ချစ်နေစေချင်တာ ̓
̒ ကျွန်မ ရှင့်ကို တစ်သက်လုံးချစ်နေမှာပဲ ̓
̒ ဒါပေမယ့် . . . . ̓
သူ တစ်ခုခုကို စိတ်ပူပင်လျက်ရှိသည်။
̒ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လဲ ̓
̒ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတာ သီးသန့်ထူးခြားမှုတစ်ခုပဲ၊သီးသန့်အရသာတစ်ခုပဲ၊ အဲ့ဒါကို တခြား ဘယ်အရာအဖြစ်မှ ပုံစံပြောင်းလို့မရဘူး ̓
̒ ဘယ်သူက ပုံစံပြောင်းဖို့ပြောနေလို့လဲ ̓
̒ မင်းပြောနေတယ်လေ၊ မင်းကိုယ့်ကို ပန်းချီဆွဲချင်တယ် ပန်းချီဆွဲချင်တယ်နဲ့ ခဏခဏပူဆာနေတယ်လေ၊ အဲ့ဒါမင်းက ကိုယ့်အချစ်ကိုပန်းချီကားအဖြစ်ပုံစံပြောင်းပစ်ချင်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား ̓
̒ ဟောတော် . . . . . ဘယ်လိုအမြင်မျိုးပါလိမ့်̓
ကျွန်မစိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်သွားသည်။သူက စိတ်ရှည်စွာ ပြုံးနေဆဲ။
̒ မင်းကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုပန်းချီဆွဲချင်တာလား၊ ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ကို ပန်းချီဆွဲချင်တာလား̓
ကျွန်မ ဘယ်လိုဖြေရင် သူ့ဆီကဘာအမြင်တွေ ထွက်လာဦးမှာလဲ။
̒ ကျွန်မ မသိဘူး ̓
̒ အချစ်ကို ဆွဲချင်တာ ဖြစ်မှာပါ̓
̒ ရှင်က ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အတိအကျပြောနိုင်တာလဲ̓
̒ ဟ . . . . ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲပန်းချီဆွဲချင်မှတော့ မင်းကိုယ့်ကို လက်ထပ်စရာတောင် အကြောင်းမရှိဘူးလေ
ဟုတ်များ ဟုတ်လေမလား မသိပါ။
̒ ဒီမယ် မိန်းမ. . .မြဲမြဲမှတ်ထား၊အချစ်ရဲ့ အရသာကို မင်းဘယ်တော့မှ ပန်းချီနဲ့ သရုပ်မဖော်နိုင်ဘူး ̓
ကြည့်စမ်း၊ ဒါ ကျွန်မ၏ အနုပညာကိုသူစော်ကားလိုက်တာပဲ။
ကျွန်မ မျက်လုံးအစုံကို ဗြုန်းခနဲဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ ကျွန်မ၏ ဘေးတွင် သူအိပ်မောကျနေဆဲဖြစ်၏။ သူ့ဦးခေါင်းသည် ခေါင်းအုံးပေါ်ပြန်ရောက်နေပြီ။ သူ့ညာဘက်လက်က သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ရှိဆဲ။ သူ့ဘယ်ဘက်လက်က ကျွန်မ၏ ဦးခေါင်းနောက်ဘက်မှာ။ ကျွန်မ သူ့လက်ပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်ပျော်သွားမိပုံရသည်။ သူ့လက်တွေ ကျင်နေရောပေါ့။ ကျွန်မ အသာလေး ခေါင်းထောင်ထလိုက်သည်။ ကျွန်မ ခေါင်းအောက်မှာရှိနေသောသူ့ဘယ်လက်ကို နေသားတကျ ပြန်ထားပေးလိုက်သည်။ ခုတင်ပေါ်မှာ ကျွန်မဆင်းလိုက်သည့်အချိန်တွင် တိုင်ကပ်နာရီမှ နာရီထိုးသံ သုံးချက်ကြားလိုက်ရ၏။ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ လိမ္မော်ရည်တစ်ခွက်လောက် သောက်ရလျှင်ကောင်းမည်။ ကျွန်မ ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်သည့်အခါ ထောက်တိုင်၏ ခြေထောက်နှင့်ခလုတ်တိုက်မိ၏။ ထောက်တိုင်လည်း မလဲကျပါ။ ကျွန်မလည်းလဲကျမသွားပါ။ သို့သော် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ထောင်တိုင်ရွေ့လျားသွားသံကနည်းနည်းကျယ်လောင်သွား၏။
̒ မင်း ဘာလုပ်နေတာလဲ ̓
ကျွန်မ လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါသူသည် ခေါင်းအုံးပေါ်တွင် မေးတင်လျက် ၀မ်းလျားမှောက်ရင်း ကျွန်မကို ကြည့်နေသည်။ သူ့မျက်လုံးတွေက မယုံသင်္ကလာမျက်လုံးတွေ။ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေသောမျက်လုံးတွေ။ အားစိုက်၍ ဖွင့်ကြည့်နေရသော မျက်လုံးတွေ. . . . ။ ကျွန်မ သူ့ကိုပြုံးပြလိုက်သည်။
̒ ဘာမှမလုပ်ဘူး။ ဒီထောက်တိုင်ကြီးကို ဒီနားမှာ ကိုးလို့ကန့်လန့်ဖြစ်နေတာမကြည့်ချင်လို့ နေရာရွှေ့မလို့ ̓
ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်မကင်းဘက်စ်အလွတ်ကိုချိတ်ထားသော ထောက်တိုင်ကို မ၍ နေရာရွှေ့လိုက်သည်။ အခန်း၏ တစ်ဖက်နံရံနှင့် ကပ်နိုင်သမျှ ကပ်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
̒ ကျေနပ်ပြီလား ̓
̒ ကောင်းတယ် ̓
̒ ကျွန်မ လိမ္မော်ရည်သွားယူမလို့၊ရှင်သောက်ဦးမလား ̓
̒ ကောင်းသားပဲ ̓
သို့သော် သူ့မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးနှင့်ပြန်အပ်လိုက်ပြန်သည်။ ကျွန်မသိပါသည်။ ကျွန်မပြန်ဝင်လာသည့်အခါ သူအိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်လိမ့်မည်။
Typing Credit & Special Thanks go to Aye Myint Mo
ရည်းစားနှင့် ချိန်းတွေ့ပြီး ယောက်ျားလေးကို ရွှေလက်ကောက် ခိုးယူဟု စွပ်စွဲ
မုံရွာမြို့၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက် ၀င်းယူနတီဟိုတယ်တွင် တည်းခိုခဲ့ပြီးနောက် စုံတွဲတစ်တွဲမှ မိန်းကလေးဖြစ်သူက ရွှေလက်ကောက် ပျောက်ဆုံးသွား သည့်အတွက် သူမနှင့်အတူ တည်းခိုခဲ့သူ ယောက်ျားလေးကို ခိုးယူ ပေါင်နှံသူအဖြစ် စွပ်စွဲတိုင်တန်းလိုက်သည့်အတွက် ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်လိုက်သည်။
ခိုးယူခံရသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်မှာ ပလက်တီနမ်မှုတ်ထားသည့် တစ်ကျပ်သားခန့်ရှိသည့် ရွှေထည် လက်ကောက်နှစ်ကွင်းဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုနေစဉ်အတွင်း မိန်းကလေး၏ လက်ကိုင်ပိုက်ဆံ အိတ် အတွင်း ထည့်ထားခဲ့သည်ဟု ရဲစခန်းတွင် ထွက်ဆိုထားသည်။
အွန်လိုင်းသီချင်းရောင်းဝယ်မှုကို လေးဖြူရဲ့သီချင်းသစ်နဲ့စတင်မယ့် ဦးကိုကိုလွင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under တွေ့ဆုံမေးမြန်း | No comments
ယခင်အပတ်ထုတ်ဂျာနယ်မှာ အွန်လိုင်းသီချင်း ရောင်းဝယ်မှု စီစဉ်ပေးသူဦးကိုကိုလွင်ကို website ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ အခုအပတ် ထုတ် မှာတော့ website အသုံးပြုနည်းနဲ့ သီချင်းရာခိုင်နှုန်း ခွဲဝေမှုစနစ်တွေအကြောင်း ဆက်လက်မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။
မေး- ဦးတို့ website မှာ သီချင်းတင်တဲ့အခါ သီချင်းတွေကို ဘယ်လို ယူပါသလဲ။ ခုလက်ရှိ ဂီတအစည်း အရုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေမှုပြဿနာတွေလည်း ဒီလို အွန်လိုင်း ဈေးကွက်ကတစ်ဆင့် ခွဲဝေမှုတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေမှု ကိစ္စတွေမှာ ဦးတို့အနေနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိလား။ ဒီ အပေါ်မှာကော ဘာပြောချင်လဲ။
ဖြေ-ကျွန်တော်တို့ website က ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ထုတ်လုပ် သူတစ်ယောက် ရောင်းချင်ပါတယ်ဆိုမှ လာရောင်းတာကို လက်ခံ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာ သာ ရောင်း ပြီး ဖြန့် ခွဲပေး တာမဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ ခုလက်ရှိ Chillsession ဆိုရင် သူတုိ့ ဘာသာရေးဆိုတီးစသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းခွဲပြီးသား။ ဒီမှာရောင်းချင်တယ်ဆိုလာရင် ကျွန်တော် တို့က ရောင်းပေးတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေမှုတွေက ကျွန် တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။သူတို့ အသီးသီးကျေနပ်တဲ့ရာခိုင် နှုန်းနဲ့ခွဲပြီး သားကိုမှ ကျွန်တော်တို့ က ပြန်ရောင်းပေးတယ်။ သူတို့ အချင်းချင်း သဘောတူထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း ကျွန်တော်တို့က ပြန်ခွဲဝေ ပေးတယ်။
မေး- မြန်မာပြည်မှာ တရားဝင် ရောင်းတဲ့ အွန်လိုင်း website က ဒီ Myanmar Music Store တစ်ခုပဲရှိတာလား။ အစည်းအရုံးကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အရောင်းကိစ္စတွေ အတွက် အကြမ်းဖျင်းခွဲဝေမှုဆိုတာ Myanmar Music Store အတွက် ဆိုပြီး ခွဲဝေမှု ဖြစ်လာတာလား။
ဖြေ- လတ်တလောတော့ ကျွန်တော်တို့ site တစ်ခုတည်းပါ။ ဒါပေမဲ့ ခုနကသတ်မှတ်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေမှုဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ site တစ်ခုအတွက်ဆို ရည်ရွယ် သတ်မှတ်ခဲ့တာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ အရင်ကတည်းက ဒီလို online အရောင်းအဝယ် တွေသာ ပေါ်လာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဟိုးအရင်ကတည်းက တိုင်ပင်ထား တာ။ ဒီ site တစ်ခုတည်းအတွက် ဆွေးနွေးထားတာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်တခြား site တွေလည်း ပေါ်လာဦးမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့လည်း အစည်းအရုံးက ယူပြီး ရောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင်က လာရောင်းမှ ပြန်ရောင်းပေးတယ်။ အစည်းအရုံးကတော့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် အကြမ်းဖျင်း သတ်မှတ် ထား တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒါကို မကျေနပ်ရင် ကိုယ့်ဘာသာညှိပြီး လာရောင်းလို့ရတယ်။ အမှန်ကတော့ ဒါက တစ်ခွေချင်းမှာ ထုတ်လုပ်သူလည်း မတူဘူး။ အဆိုတော်၊ တီးဝိုင်း ချင်း လည်း မတူဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်အခွေကိုယ်ရှင်းရင် ပိုကောင်းမယ်။ ဒီရာခိုင်နှုန်းတွေ fair ဖြစ်လား၊ မဖြစ်လားဆိုတာ ထုတ် လုပ်သူတွေအပေါ်မှာလည်း မူတည် တယ်။ အခွေလုပ်ချိန်မှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လုပ်ထားလဲ မသိဘူးလေ။တချို့ အခွေတွေမှာဆို ထုတ်လုပ်သူက အစကတည်းက ၁ဝဝရာခိုင်နှုန်းယူဖို့ သတ်မှတ် ညှိနှိုင်းထားတဲ့ အခွေမျိုးလည်းရှိမယ်။ အမျိုးမျိုးရှိမယ်။ ဒါကို အားလုံးတစ်ပြေး ညီတော့ သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစည်းအရုံးက သတ်မှတ်ပေးတယ် ဆိုတာလည်း ပုံသေနည်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ အများလက်ခံချင်ရင် ဒီနည်းတော့ရှိတယ် ဆိုတာမျိုးပြော တာ။အစကတည်းက ခွဲထားတာ မရှိရင် ဒီနည်းလေး ယူသုံး မလားပေါ့။ မကြိုက် ဘူး ဆိုရင်လည်း ကိုယ့် ဘာသာ ရာနှုန်းပြန်ခွဲ ပြီး လုပ်ပေါ့။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် ထုတ်လုပ်တဲ့ အခွေတွေမှာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းယူမယ်။ ဒီလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လုပ်ထားမယ်။
မေး- စတင် Lunch လုပ်မယ့် အောက်တိုဘာ ၂၇ရက် နေ့မှာရော၊ ဒီ website အနေနဲ့ဘာတွေထူးထူးခြားခြားလုပ်သွားဖို့ရှိလဲ။ သီချင်း ဝယ်ယူမှုပုံစံကို အကျဉ်းပြော ပြပေး ပါ။
ဖြေ- အဲဒီနေ့မှာတော့ လေးဖြူသီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်ကို single တင်မယ်။ ဖွင့်ပွဲနေ့မှာတော့ ထူးထူးခြားခြားကြီးလုပ်သွားဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ဈေးကလည်း ပုံမှန်ဈေးအတိုင်းပါပဲ။
နောက် ပိုင်းမှာတော့ သီတင်းကျွတ် အထူးအစီအစဉ်မျိုး၊ တန်ဆောင်တိုင် အထူးအစီအစဉ်စသဖြင့် လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်။ ဝယ်ယူမှုစနစ် ကတော့ ၄မျိုးရှိ တယ်။ M pay, Y pay, Pre paid card နဲ့ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းဘေလ်ပေါ့။ မြန်မာပြည်တွင်းက အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဖုန်းဘေလ်နဲ့က အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ website မှာ register ဝင်ပြီး ဝယ်ယူမှုစနစ်တွေထဲကမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းစနစ်ကိုရွေးပြီး ဝယ်ယူမယ့် သီချင်းမှာ ကိုယ့်ဖုန်း နံပတ်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် ဖုန်းထဲက ဝယ်သ လောက် ပိုက်ဆံဖြတ်သွား မယ်။တစ်ပုဒ် ကို ၃ဝဝ၊ တစ်ခွေ လုံးကို ၁၈ဝဝနဲ့ ရမယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် လည်းဖုန်းကတစ်ဆင့် 18899 ကို SMS မတ်ဆေ့ခ်ျပို့လိုက်ရင် ကိုယ့်ဖုန်း ထဲကို ဝယ်ယူတဲ့ သီချင်းရဲ့download link ရောက်လာမယ်။ အဲဒီလိုမျိုး နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အသေးစိတ်ကိုလည်း website မှာတင်ပေး ထားပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ မေမေနဲ့တကွ အမေများအားလုံးကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ (ဖတ်ပြီးလို့ကောင်းတယ်ထင်ရင်တော့ ရှယ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့)
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under ဆောင်းပါး | 1 comment
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ငလျင်အကြီးအကျယ်လှုပ်ပြီးတဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်ထူထောင် ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်..။ ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာ ပျက်စီးနေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးရဲ့ အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ.. အဆောက်အဦ အပုံပျက်များကြားထဲက သေဆုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီး အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် သူမသေဆုံးနေတဲ့ပုံစံက ထူးခြားလို့နေပါတယ်..။ သူမဟာ မြေပေါ်ကိုဒူးထောက်ထားပြီး ၀တ်ပြုနေတဲ့ ပုံစံရှိပါတယ်..။ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရှေ့သို့ ညွှတ်ကိုင်းနေပြီး လက်နှစ်ဘက်ကတော့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ထောက်မထားပါတယ်..။
အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့..၊ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ လက်တစ်ဝင်စာ အပေါက်ငယ်လေး ထဲကနေ အဆိုပါ အမျိုးသမီးအလောင်းကို ထုတ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်..။ သူတို့ ဒီအမျိုးသမီး အသက်ရှင်နေလိမ့်အုံးမယ်လို့ မျှော်လင့်ဆဲပါ.။ ဒါပေမယ့် သူ အမျိုးသမီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိမိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အေးစက်ပြီးတောင့်ခဲနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က သူမသေဆုံးကြောင်းကို သက်သေပြလို့နေခဲ့ပါပြီ.။ သူတို့ဟာ လက်လျှော့လိုက်ပြီး တစ်ခြားမှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကို အကူအညီပေးဖို့ ပြင်လိုက်ကြပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်…. ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ တစ်စုံတစ် ယောက်က သူ့ကို သေချာပြန်ကြည့်ဖို့ ဆွဲဆောင်နေတယ်လို့ ထင်တာကြောင့် သေချာအောင် သေဆုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီးကို အပေါက်ထဲကနေ ပြန် ကြည့်လိုက်ပါတယ်..။ ရုတ်တရက်ပဲ… သူစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ အော်လိုက်မိပါတယ်..
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာ တက်ညီလက်ညီနဲ့ ပိတ်နေတဲ့ အဆောက်အဦပျက်တွေ အပိုင်းအစတွေကို ဖယ်ရှားကြပါတယ်..။ သေဆုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ အောက်မှာတော့ ပန်းပွင့်တွေပါတဲ့ စောင်လေးနဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ သုံးလအရွယ် ကလေးလေး တစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်..။ အမေဖြစ်သူက သူ့ကလေးအသက်ရှင်ဖို့အတွက် နောက်ဆုံးအချိန်ထိ အသက်စွန့်ခဲ့တာပါ..။ အိမ်ပြိုကျတဲ့အချိန်မှာ.. သူမဟာ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကလေးအတွက် အကာအကွယ်အဖြစ် ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ..။ ကယ်ဆယ်ရေး ခေါင်းဆောင်ဟာ ကလေးဖြစ်သူကို ကောက်ချီလိုက်ချိန်မှာတော့ ကလေးဟာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျ လျက်ရှိပါတယ်..။
ဆရာဝန်တွေ အပြေးအလွှားရောက်လာပြီး ကလေးငယ်ကို ပြုစုပေးကြပါတယ်..။ ကလေးကို ထုပ်ပိုးထားတဲ့ အနှီးကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ.. အနှီးထဲမှာ ဖုန်းလေးတစ်လုံးကို တွေ့လိုက်ရတယ်..။ အဲ့ဒီဖုန်းမှာ မက်ဆေ့(စ်) တစ်ကြောင်းရှိနေပါတယ်..။
"သားတစ်ကယ်လို့ အသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်.. အမေသားကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့…" တဲ့….။ သြော်… အမေ့မေတ္တာ…. ကြီးမားလှချေလားဗျာ…။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထုတွေ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မှတ်ပုံတင်) တွေကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ စမတ်ကတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးဖို့ စီစဉ်နေပြီလို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့ အင်အား ဦးစီး ဌာနက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ထုတ်ပေးနေတဲ့ ပန်းရောင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကပ်ပြာတွေဟာ အလွယ်တကူ ပျက်စီး နိုင်ပြီး ပုံစံတူ မှတ်ပုံတင်အတုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စမတ်ကတ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေး ဖို့ စီစဉ်နေတာလို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၄ ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူပြီး နောက်ပိုင်းနဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ စမတ် ကတ်တွေ ပြောင်းလဲထုတ်ပေးနိုင်အောင် စီစဉ်နေတာလို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေး နဲ့ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ဦးစီဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်လင်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းပြီးရင် အဓိကကတော့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲစာရင်းပြုစုတဲ့ အခါမှာ မထပ် မကျန်အောင် လူစာရင်းတွေ ပါအောင် အထောက်အကူပြုမှာပါ။ လူဦးရေ အပေါ်မှာ ထပ်ပြီးရလာမယ့် အကျိုးအကျေးဇူး အားလုံး၊ ၀န်ကြီးဌာနအားလုံးကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်မယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက်လည်း အထောက်အကူပြုမယ်။ စိစစ်ရေး ကတ်ပြားတွေ စမတ်ကတ်တွေ ဖြစ်လာမယ်။ နောက် ပီအာရ် စနစ်တွေ ဆက်တိုက်လာမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့။ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အများကြီးထုတ်ထားပြီးပြီ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ စမတ်ကတ်တွေပဲ သုံးတော့တယ်။ ရေစိုပျက်တာတို့ ဘာတို့ သက်သာတယ်။ တာရှည်ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်တယ်။”
မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ အပါအ၀င် ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာ မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားတွေကို ကွန်ပျူတာစနစ်သုံး စမတ်ကတ်တွေအဖြစ် အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကတ္ထူစက္ကူနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားတွေကိုပဲ အသုံးပြုနေကြတာပါ။
ရန်ကုန်မှာ စမတ်ကတ်တွေ လုပ်ပေးနေတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကောဒစ် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးအောင်သပြေကတော့ အချက်အလက်တွေ ထည့်သိမ်းဆီးထားနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စမတ်ကတ်တွေကို သုံးသင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“လုပ်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးကတော့ တကယ့် စမတ်ကတ်အစစ် အချက်အလက်တွေလည်း ထည့်ထားရမယ်။ နိုင်ငံတော် ဗဟိုအဆင့်မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထည့်ထားမယ်။ ဒါတွေကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမယ်၊ အဲဒီအဆင့်ထိ လုပ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာ အခု မှားယွင်းနေတာက ဘာမှ ကွန်ပျူတာနဲ့ သုံးလို့မရတဲ့ ပလတ်စတစ်ကတ်ကို စမတ်ကတ်လို့ ခေါ်နေတာက မှားယွင်းနေတာပေါ့။ သူတို့ ပြောတဲ့စမတ်ကတ်ဟာ ရိုးရိုး ပလတ်စတစ်ကတ်ပဲလား၊ ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးစနစ်တွေနဲ့ သုံးနေတဲ့ မခွဲခြားနိုင်လို့ ဖြစ်မှာပေါ့။”
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၈၅ ခုနှစ်ကစပြီး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်အတာနဲ့ ကတ်ပြားပေါင်း ၃၉ သန်းကျော် ထုတ်ပေးထားတယ်လို့ နေပြည်တော် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ဦးစီးဌာနက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ သန်း ၆၀ လောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပေမယ့် လက်ရှိလူဦးရေ စာရင်းအတိအကျကိုတော့ လာမယ့်နှစ် မတ်လမှာ ပြုလုပ်မယ့် ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်မှုအပြီးမှာမှ အတည်ပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မဟာမိတ်တွေအပေါ် အမေရိကန် လျှို့ဝှက် ထောက်လှမ်းမှု EU ရှုတ်ချ
အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအစီအစဉ်တွေကို စုံစမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုချီတက်လာသူများ။ (အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ သူ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအပေါ် သူလျှိုလုပ် ထောက်လှမ်းတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲ ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန် တာဝန်ရှိ သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ဥရောပသမဂ္ဂလွှတ်တော်အမတ်တွေ ၀ါရှင်တန်ဒီစီကို ရောက်နေကြပါတယ်။
၂၃ ဦးပါတဲ့ ဥရောပပါလီမန် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ မနေ့ တနင်္လာနေ့ကစပြီး အမေရိကန် လွှတ်တော် အမတ်တွေ၊ အိမ်ဖြူတော် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ကောင်စီ အပါအ၀င် အစိုးရအေဂျင်စီတွေက တာဝန်ရှိ သူတွေ နဲ့ စပြီး ဆွေးနွေးနေကြ ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ လုပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီအနေနဲ့ ဂျာမဏီ ၀န်ကြီးချုပ် Angela Merkel လက်ကိုင်ဖုန်းကို ကြားဖြတ် နားထောင်တာအပါအ၀င် မဟာမိတ်တွေကို သူလျှိုလုပ် ထောက်လှမ်းတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေ အတွင်း ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေက အမေရိကန်ကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံကလည်း ဒီလုပ်ရပ်ဟာ လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ မသင့်တော်တဲ့ လုပ်ရပ် ဖြစ်တယ်လို့ ပြစ်တင် ပါတယ်။ စပိန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး James Costos ကို ၄၅ မိနစ်ကြာ ဆင့်ခေါ် စကားပြောခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ဟာ လ တစ်လထဲမှာတင် စပိန်နိုင်ငံက ဖုံးဆက်သွယ်မှုပေါင်း သန်း ၆၀ ကျော်ကို လျှို့ ၀ှက်ကြားဖြတ် နားထောင်ခဲ့တယ်လို့ စပိန်သတင်းစာကြီး နှစ်စောင်က ရေးသားလိုက်ပြီး နာရီပိုင်း အတွင်း မှာပဲ အခုလို စပိန်နိုင်ငံခြားရေးက အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ ကနေ အခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့အထိ ဖုံးဆက်သွယ်မှုတွေကို NSA အမေရိကန် အမျိုး သားထောက် လှမ်းရေးအေဂျင်စီက လျှို့ဝှက် ကြားဖြတ် နားထောင်ခဲ့တယ်လို့ El Mundo နဲ့ El Pais သတင်းစာကြီးတွေက ရေးခဲ့ကြတာပါ။
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under ပေးစာ | No comments
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ယခုအချိန် အရေးအကြီးဆုံးသောကိစ္စကိုပြောပါဆိုလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ဟုသာပြော ရပေလိမ့်မည်။ လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ သည် ရေခံမြေ ခံကောင်းပါလျှက် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများ နောက်ကျကျန်ခဲ့ရသည်။ မြန်မာပြည် ခေတ် နောက် ကျခဲ့ရခြင်း ၏ မူရင်းလက်သည်၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများ၏ ဘဝများစွာကို ဖျက်ဆီးခဲ့သော တရားခံ၊ တိုင်းပြည်၏ ဓနတို့ကို လျော့ပါးဆုတ်ယုတ်စေခဲ့သော ဖုတ်ကောင်အဖြစ် ပြည်တွင်းစစ်က နေရာယူခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်စ နစ်သစ်ဖြင့် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်နေချိန်တွင်လည်း ပြည်တွင်းစစ်သည် ဧရာမအတား အဆီးကြီး တစ်ခု သာဖြစ်သည်။ ထိုအတားအဆီးကို ကျော်လွှားချေဖျက်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးကော်မ တီမှ အားသွန်ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိရာ အခြေအနေကောင်းများ ထွက်ပေါ် နေပြီဖြစ် သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီမှုများ ရရှိထားပြီး မရသေး သည့် KIO နှင့် TLNA တို့ကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေးနွေးလျှက်ရှိရာ ပြည်သူပြည်သား တစ်ဦး အနေဖြင့် များစွာအားရကျေနပ်မိသည်။
ပြီးခဲ့သော အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးကော်မ တီနှင့် KIO တို့၏ ၃ ရက်ကြာအစည်းအဝေးသည် ရလဒ်ကောင်းများရှိပြီး အိမ်ပြန် ချင်နေသောဒေသ ခံတို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်နီသန်းလာခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွား ခဲ့သော စစ်ပွဲများကြောင့် သိန်းဂဏန်းရှိသော ဒေသခံတို့မှာ အိုးအိမ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စွန့်လွှတ် ကာ ဘေးလွတ်ရာသို့ ပြေးလွှားရှောင်လွှဲခဲ့ရသည်။ ၃ ရက်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့သော KIO နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး ပွဲမှ သဘောတူညီမှု ၇ ရပ်ရရှိခဲ့ရာ နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများ၏ မူရင်းနေရပ်သို့ပြန်၍ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းအပေါ်များစွာ နှစ်ထောင်းအားရဖြစ်ခဲ့မိသည်။ သို့သော် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများကို ဂရုတစိုက်စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတစ်ဦးအနေဖြင့် စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲသည်ဟုပင်ဆိုဆို၊ သတိတရားရှေ့တန်းထားလွန်းသည်ဟုပင် ပြောပြော၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးစီး ဦးဆောင်ပြုသူ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတွင် စေတနာစိတ်စော၍ ပမာဒလေခ အမှားပါသွားမည်ကို စိုးရိမ်မိပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲရက်များအတွင်း KIO ၏ တစ်ဖက်က ဆောင်ရွက်ချက်များသည် စာရေးသူ၏ သံသယစက်ဝန်းထဲသို့ ကျရောက်လာခဲ့ပါသည်။
စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည့်တိုင် အခုတစ်ဖန်ပြန်ပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည့်အဖွဲ့များသည်လည်း ထိုစဉ်က လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဖွဲ့များဖြစ်သည်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ အစိုးရပြောင်းသည်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လည်း ပျက်ပြယ်ခဲ့ရာ ၃ နှစ်သက်တမ်းတွင် ယခုအစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားတပ်များကြား တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ် အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ယခုအစိုးရ၏ လက်ကျန်သက်တမ်း ၂ နှစ် လောက်ပဲခံတော့ မလားဟု တွေးစရာဖြစ်လာတော့သည်။ ဤအတိုင်းသာ ဆက်ဖြစ်နေလျှင် အစိုးရသက်တမ်း ၅ နှစ် တစ်ကြိမ်ပြောင်းတိုင်း ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ဆွေးနွေး လက်မှတ်ထိုးရမည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာလေမည်လားဟု ထင်စရာဖြစ်ပေသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးတည်မြဲဖို့ဆိုလျှင် နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့၏ သဘောထားမှန်ကန်မှုရှိရန် အရေးကြီး သည်။ ရည်ရွယ်ချက်ခိုင်မြဲဖို့လည်းလိုသည်။ သဘောထားလည်းမမှန်၊ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အချိန်မရွေးပေါက်ကွဲနိုင်သော ဗုံးတစ်လုံးသာဖြစ်နိုင်သည်။ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိ်ုင်းသည် ရင်တွင်းစကားများကို စေတနာမှန်မှန်ဖြင့် ထုတ်ဖော်နိုင်ရန် အရေး ကြီးသည်။ ဟန်ဆောင် ဖုံးကွယ်နေ၍မရပေ။ တကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် လိုလားသောစိတ်သည်သာ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းရန်အတွက် လမ်းပြကြယ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ တကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် ရိုးသားမှုကို အခြေခံပြီး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေသည့်ကာလသည် တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရသော အကဲခတ်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်ကို နှစ်ဖက်စလုံးက သတိပြု သင့်သည်။ အလားတူ နှစ်ဘက်လုံးလည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အကဲခတ်နေကြပေလိမ့်မည်။ သို့သော်တရားဝင် ရပ်တည်မှုရပြီး အစိုးရနှင့်လက်တွဲရန် သူပုန်ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်မှ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး အင်အားစု ဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်သို့ ကူးပြောင်းမှုအတွက်တွင်မူ သူပုန်နာမည်ခွာလိုသူများက အထူး ဆင်ခြင်ကြရမည့်သဘောရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် လတ်တလော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်အချို့၏ ဒွိဟဖြစ်စရာ အခြေအနေကို လက်လှမ်းမီသလောက် လေ့လာကြည့်မိပါသည်။
KIO သည် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှ ၁၀ ရက်ထိငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးသည့်တိုင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆီသို့ မရောက်ခဲ့ပေ။ ဒေသခံများ မူလနေရပ်ပြန်ရေးအတွက် အာမခံမရှိသည့် အခြေအနေပင် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့သူများသည် တိုက်ပွဲများပြန်ဖြစ်လာမည်ကို ကြောက်ရွံ့စိုးထိတ်နေကြဆဲဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းပြင် ကချင် FM မှ ထုတ်လွှင့် ခဲ့သော ဝမ်ပေါင်အစိုးရဟူသော စကားလုံးများသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအပေါ် စင်ပြိုင်သဘောဆောင် သော စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်စေပြီး လွတ်လပ်သော ဝမ်ပေါင်နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေး ရည်မှန်းချက်အပေါ် စွန့်လွှတ်မှုမရှိသေးကြောင်းကို ဖော်ပြလျက်ရှိသည်ဟု မြင်မိပါသည်။ ထိုမျှမက ရန်ကုန်အပါအဝင် မြို့နယ် အသီးသီးတွင် လူမျိုးရေးအခြေခံစည်းရုံးမှုများကလည်း လူငယ်များကြားတွင်ပျံ့နှံ့လာရာ ထိန်းချုပ် နယ်မြေနှင့် စပ်ကြားနယ်မြေများတွင် လူသစ်စု၊ ဆက်ကြေးကောက်သကဲ့သို့ မြို့ပြအသွင်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လေသလား ထင်မှားစရာတွေရှိလာနိုင်ပေသည်။ ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်ကိုင်ပြုပြီး လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ကဗြောင်းကပြန်လုပ်ဆောင်ရန် ဝါဒဖြန့်ချိနေမှုများသည်လည်း အစိုးရအပေါ် အကျပ်ကိုင်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်မှာ ဆင်ခြင်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် အခြေခံဥပဒေကို လွှတ်တော်ပြင်ပ အသစ်ရေးဆွဲရေး အထိ ညာသံပေးနေမှုများ၊ ဆွေးနွေးပွဲအပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိကြောင်း ပြောဆိုထုတ်လွှင့်နေမှုများက အခြေခံ ဥပဒေကို ကာကွယ်ရန်တာဝန်ပေးအပ်ထားသော တပ်မတော်အပေါ်၌ပါ စိန်ခေါ်နေသယောင်ဖြစ်စေပြီး တိုင်းရင်းသားအရေး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အခြားလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားများကိုပါ ဦးဆောင်စည်းရုံးဆောင်ရွက် ချက်များသည် တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် ယုံကြည်မှုအတွက် အတားအဆီးဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို သတိမူ သင့်ပါသည်။
UWSA ခေါ် ‘‘ဝ’’ တပ်ဖွဲ့များသည်လည်း ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲမထွက်ဟု အာမခံထားသည့်တိုင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၎င်းတို့နယ်မြေအပေါ် ဖြတ်သန်း သွားလာ ဝင်ရောက်မှုအပေါ် ကန့်သတ်မှုများထားရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက ဝ ပြည်နယ်တောင်းဆို မှုမျိုးသည် အခြေခံဥပဒေတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးထားသည့်တိုင် ထပ်မံတောင်းဆိုလာသော အခွင့် အရေးဖြစ်သဖြင့် အခြားလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများအတွက် ရင်လေးစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝ ပြည်နယ် တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဘူးသီးတောင်-မောင်းတောဒေသတွင် မွတ်ဆလင်ပြည်နယ်တောင်းဆိုမှုများ အသံ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်ကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါသည်။ အခြားတိုင်းရင်းသားများကပါ သီးခြားပြည်နယ် ထူထောင်ခွင့် တောင်းခံလာပါက တစ်ချိန်က ရန်ကုန်အစိုးရဟု အများကသမုတ်သည့်အဆင့် ပြန်ရောက် သွားလေမလား တွေးတောမိပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် လအနည်းငယ်က တပ်စခန်းတိုးချဲ့မှုများနှင့် တရုတ်မှ ရဟတ်ယာဉ် ၂ စီး ဝယ်ယူမှုများကြောင့် အစိုးရထံပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ရာတွင်လည်း ပြည်သူလူထုကျေနပ် လောက်အောင် ပီပီပြင်ပြင်ဖြေရှင်းမှုမတွေ့ရပေ။ သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြလျက်ရှိသည့် လက်နက် စက်ရုံများတည်ထောင်မှု၊ သံချပ်ကာ တိုက်ယာဉ်များစုဆောင်းမှုတို့မှာလည်း အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို ၎င်းတို့နယ်မြေအတွင်း ဝင်ရောက်သွားလာခြင်းဖြင့် သိမြင်သွားနိုင်သည့်အခြေအနေကို ဖုံးကွယ်လို၍ ကန့်သတ်ထားလေသလားဟု ထပ်ဆင့်တွေးတောစရာ ဖြစ်နေပါသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အပေါ် အသံမထွက်ခဲ့သည့်တိုင် ယခုအခါ ထိပါးပြောဆိုသံများ ထွက်လာခြင်းကလည်း သံသယပွားဖွယ် ဖြစ်နေပြန်သည်။
၎င်းပြင် NDAA(မိုင်းလား)အဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအနေဖြင့် မကြာသေးမီကထွက်ပေါ်လာသော UNODC ၏ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် ရွှေတြိဂံဒေသ၌ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုများ မြင့်မားစွာရှိနေသေးကြောင်း ဆိုထားပြန်ရာ ယုံကြည်မှု(Trust)အတွက် အတားအဆီးဖြစ် နေသေးသည်။ ပြည်ပသတင်း ဌာနများကလည်း ရွှေတြိဂံဒေသတွင် လူကုန်ကူးမှုနှင့် လက်နက်မှောင်ခို မှုများ ကြီးထွားနေကြောင်း ထုတ်လွှင့်လျှက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့နယ်မြေအတွင်း တိုက်ပွဲများမဖြစ်စေရေး လိမ္မာ ပါးနပ်စွာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို တွေ့နေရသော်လည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ထောက်ခံ မှုတွင် မပါဝင်သကဲ့သို့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ဒီမိုကရေစီပြင်ပ ဒေသမှ NDAA(မိုင်းလား) လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့၏ ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေခြင်းသည်လည်း စဉ်းစားစရာ အချက်များဖြစ်ပါသည်။
အောင်မြင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအဖြေကလည်း ယနေ့တိုင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေး၍ ရှေ့အနာဂတ် သည် ဝေဝါးမှုမပြယ်သေးပေ။ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်လျှက်ရှိရာ မငြိမ်းချမ်းသမျှ တိုးတက်မည်မဟုတ်ချေ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် အစိုးရတစ်ခု တည်းတွင် တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ဘဲ ဆက်စပ်ပလေယာများတွင်လည်း တာဝန်ရှိသည်။ ပြည်သူများ၏ ဥပဒေအကာအကွယ်သည် ဥပဒေပြင်ပလောကသားများရှိနေပါက ခြိမ်းခြောက်ခံနေရဦးမည်သာဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခု၏အသက်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပင်ဖြစ်သည်။ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်း လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ပြီး ကိုယ်စီတာဝန်ကို ကျေပွန်မှသာ ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခု၏ နိုင်ငံသားများပီသကြ မည်ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေသော လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည်လည်း ဤနိုင်ငံသားများဖြစ် သည်နှင့်အညီ ဤနိုင်ငံ၏ဥပဒေအပေါ် လေးစားလိုက်နာကြရမည်သာဖြစ်၏။ ဥပဒေဘောင်တွင်းမှ ပြည်သူကိုလေးစားကြောင်း ပြသရန်လိုသည်။ သို့မှသာ နိုင်ငံရေးကိုယ်ကျင့်တရားကို ပြည်သူကအကဲခတ် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော ဒီမိုကရေစီမိသားစုနိုင်ငံများအသိုက်အဝန်း၏ ကောင်းမွန်သော အကျိုး ရလဒ် များရရှိရန် ခေါင်းဆောင်တို့၏ ပရဟိတစိတ်ထားက အခရာကျပါသည်။ အများပြည်သူအတွက် အနစ်နာခံရဲသောစိတ်သည် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့၏ အာဇာနည်နှလုံးသားဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံသား အားလုံးကောင်းစားရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ မဖြစ်မနေတက်ကြရပါလိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းက ပြည်ပဧည့်အဝင်များခဲ့ပြီး မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အလားအလာကောင်းများ ဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ ဒေသတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့သည် သဘာဝ အလှများဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဆွဲဆောင်ထားပြီး ရိုးရာဓလေ့များက အစိုးရနှင့် ပြည်သူကို ဝင်ငွေများစွာ ရရှိစေခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေအထားအရ လှပသော သဘာဝဒေသများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်တိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလေ့များ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်တိုင် မြန်မာတို့အတွက် ပြည်တွင်းစစ်က အဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့သည်။ မငြိမ်းချမ်းသောဒေသများကြောင့် ခရီးသွားနယ်ပယ်ကျဉ်းမြောင်းစေခဲ့ပြီး ဒေသခံတို့အတွက်လည်း စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခု ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သို့တိုင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးသားဖော်ရွေမှုကြောင့် ကမ္ဘာ့လည်ပတ်ချင်စရာအကောင်းဆုံး တိုင်းပြည်အဖြစ် ပြည်ပပုံနှိပ် မီဒီယာများက ချီးကျူးဖော်ပြခဲ့ရာ မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဦးမော့လာခဲ့သည်။ သို့သော် လှေပြေးတုန်း တက်ကျိုးရသော ကိစ္စများကလည်း ရှိခဲ့ပြန်သည်။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်ခဲ့သလို ပြည်သူများအတွက်လည်း ယုံကြည်မှုများ ပျက်ပြား စေခဲ့ရသည်။ ပြည်သူ့ဘဝ လုံခြုံရေးသည် အစိုးရနှင့် လုံခြုံရေးပလေယာများ၊ အင်စတီကျူးရှင်းများ အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အတူ ပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံရေးသည်လည်း ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းရမည့် ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ လူထု၏ စိုးရိမ်သောကများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်ကို မမေ့သင့်ပေ။ ထိုမျှမက နိုင်ငံတကာ၏ယုံကြည်မှုကလည်း တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အရေးပါသည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် အမေရိကန်သံရုံးက ထုတ်ပြန်သော ၎င်းနိုင်ငံသားများ အတွက်သတိပေးစာသည် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်သာမက နိုင်ငံအတွက်ပါ မျက်နှာမလှဖြစ်ခဲ့စေသည်။ မြန်မာပြည်သည် ငြိမ်းချမ်းသောပြည်ဖြစ်ကြောင်း ပုံရိပ် ကောင်းကို မြန်မာတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရပေမည်။
အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးတော်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများက တိုင်းရင်းသားများအရေးနှင့် ပတ်သက် လာလျှင် ဦးစားပေးလေ့ရှိကြပါသည်။ သို့တိုင် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအဖြေမထွက်သေးဘဲ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံသလို လိုလားချက်များသည်လည်း တစ်စတစ်စများပြားလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပညာရှိသတိ ဖြစ်ခဲမို့ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် အကြံပြုလိုပါသည်။ လိုက်လျောမှုဟူသည် ဒီမိုကရေစီသဘောအရ မျှတမှုရှိရပါမည်။တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုက အခြားတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအပေါ် အနိုင်ကျင့်နိုင်သော ကိစ္စများ၊ အခြားတိုင်းရင်းသားများနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်စေနိုင်သောကိစ္စများကိုမူ ရှောင်ရှားကြရပါသည်။ အပြန် အလှန်လေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ သစ္စာရှိမှုသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူနေထိုင်သော ပြည်ထောင်စုလူမျိုးစုများ၏အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်သော ပြည်ထောင်စု အတွက်မူ ဒီမိုကရေစီစံများအပြင် ပြည်ထောင်စုဟန်များ မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းရမည်သာ ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများစွာရှိပါသည်။ အကောင်းဆုံးနည်းမှာ ဒိုင်ယာလော့ခ်ခေါ် စကားဝိုင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းသည် မြေပြင်ပဋိပက္ခများကို ကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းနိုင်သဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။ သို့သော် ဆွေးနွေးပွဲအတွက် နှစ်ဘက် စလုံးက ထိခိုက်စေသော အပြုအမူများရှောင်ရှားရပါသည်။ အမြတ်မထုတ်ရပါ။ သို့သော် လတ်တလော ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပြည်သူလူထု ကျေနပ်လောက်ဖွယ်ရလဒ်များ ထွက်မလာသေးသည့်အပြင် တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်များ၏ အကျပ်ကိုင်မှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် သဘောထားမမှန်မှုများနှင့် အမြတ် ထုတ်မှုများသာ တွေ့နေရသည်မှာ အကျိုးတော်ဆောင်ကြီးများ သတိပြုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းနည်းများစွာအနက် ဒိုင်ယာလော့ခ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်တိုင် နောက်ဆုံးနည်းဖြစ်သော လိုအပ်ပါက အင်အားသုံးဖြေရှင်းနည်းလည်း ကျန်သေးကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။ ရေရှည်သောကများကို ထွေးပွေ့မထားလိုပါ။ လုပ်စရာရှိကလည်း လိုအပ်သောအင်အားအတိုင်း ရက်ကန့်သတ် သုံးလိုက်လျှင် မြန်မြန်ကိစ္စပြီးလေမလားဟု ပြည်သူတစ်ယောက်၏ ငြိမ်းချမ်းချင်သော ဆန္ဒကိုတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, October 29, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
အသက်(၂၀) အရွယ်ရှိ မိုင်လီသည် ပရိသတ်များ အာရုံစိုက် ခံလာရအောင် အဖော်အချွတ် နည်းလမ်း များဖြင့် ဆွဲဆောင်ယူနေကြောင်း ဝေဖန်မှုများ ခံနေရပြီး ကေတီကမူ မိမိအနေဖြင့် နာမည်ဆိုးဖြင့် မကျော်ကြား လိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့
လမ်းမှားသို့ ဦးတည်နေသော ပုံစံမျိုးဖြင့် မိမိ နာမည် မကြီးလိုကြောင်း ကေတီပယ်ရီက ဖွင့်ဟ ပြောကြား လိုက်သည်။ Popဂီတ အဆိုတော် ကေတီက လက်ရှိ ဝေဖန်မှုများ ကြုံနေရသည့် မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်နှင့် နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ခံရသော မေးခွန်းမျိုးကို ပါးနပ်စွာ ရှောင်လွှဲ ဖြေဆိုသွားခဲ့သည်။ အသက်(၂၀) အရွယ်ရှိ မိုင် လီ သည် ပရိသတ်များ အာရုံစိုက် ခံလာရအောင် အဖော်အချွတ် နည်းလမ်းများဖြင့် ဆွဲဆောင် ယူနေကြောင်း ဝေဖန်မှုများ ခံနေရပြီး ကေတီကမူ မိမိအနေဖြင့် နာမည်ဆိုးဖြင့် မကျော်ကြားလိုကြောင်း ပြော ဆို ခဲ့သည်။ Le Grand ဂျာနယ်က သူမကို နာမည်ကျော်ရန် မည်သို့သော နည်းလမ်းကိုဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြု ရန် စိတ်ကူးရှိမရှိ မေးမြန်းရာ ကေတီက မရှိကြောင်း ဖြေဆိုသွားသည်။
"ကျွန်မက ကိုယ့်အာရုံနဲ့ ကိုယ်ပဲ စူးစိုက်ထားပါတယ်။ ကျွန်မ ရွေးချယ်တဲ့ အရာက ဂီတပါပဲ။ ကျွန်မအနေနဲ့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုယ် ရပ်တည်တဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းကို လေးစားမှု ထားမှာပါ။ လူတိုင်းက ကိုယ့်ရွေးချယ်မှု တစ်ခုခုကို ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့ သွားနေကြမှန်း ကျွန်မသိတယ်လေ"ဟု ကေတီက ဆိုသည်။ သူမက "ကျွန်မအတွက်ကတော့ ဂီတနဲ့ ဖျော်ဖြေမှု ပေးနေတဲ့သူ အဖြစ်ပဲ လူတွေနားလည်စေချင်တယ်။ လူတွေ နားထောင်ဖို့၊ ကြည့်ဖို့အတွက်တော့ ဆိုးယုတ်တဲ့ နည်းလမ်းမျိုး မသုံးချင်ဘူး။ ဘယ်သူတွေက ဘာတွေ သုံးတယ် လို့တော့ ကျွန်မ မပြောဘူးနော်"ဟုလည်း ပြောကြားသွားသည်။
အိမ်ပြောင်းရန် အကြောင်းဖန်လာသည့်နောက် ပစ္စည်းဟောင်းများကို ထုတ်ရောင်းသည့် အချိန်ကျမှ လေလံဌာန တာဝန်ရှိသူများက ရှေးဟောင်း အဖိုးတန် လက်ရာ တစ်ခုအဖြစ် သတိပြုမိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ရှေးဟောင်း တရုတ် ကရားအိုးကြီး တစ်လုံးသည် အဟောင်းဈေးဖြင့် ထုတ်ရောင်းချိန်ကျမှာ ပေါင်စတာလင် တစ်သိန်းခွဲမျှ တန်ဖိုးရှိနေသည်ကို အံ့ဩဖွယ် တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အိုးကြီး၏ ပိုင်ရှင်သည် မျိုးရိုးစဉ်ဆက် အမွေအဖြစ် ယင်းကို လက်ဆင့်ကမ်း ရရှိလာသော်လည်း တန်ဖိုးကို နားမလည်ခဲ့ချေ။ အိမ်ပြောင်းရန် အကြောင်းဖန်လာသည့်နောက် ပစ္စည်းဟောင်းများကို ထုတ်ရောင်းသည့် အချိန်ကျမှ လေလံဌာန တာဝန်ရှိသူများက ရှေးဟောင်း အဖိုးတန် လက်ရာ တစ်ခုအဖြစ် သတိပြုမိလာခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လေလံစတင်ရာတွင် ကြမ်းခင်းဈေးကို ပေါင်စတာလင် (၂၀၀၀)မျှသာ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်မူ ကြမ်းခင်းဈေးထက် (၂၅)ဆမျှ ရရှိကာ ပေါင်စတာလင် (၁၅၄၂၅၀)ဖြင့် ရောင်းထွက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
လစ်ဗျားတွင် ဘဏ်ကား ဓားပြတိုက်ခံရမှု ဒေါ်လာ ၅၄ သန်း ဆ...
The Voice Daily မှ သတင်းထောက်တစ်ဦး နေပြည်တော် ပျဥ...
အိမ်ထောင်ထပ်ပြုဖို့ စိတ်မဝင်စားသေးတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ...
သီပေါမြို့နယ်တွင် ရှေးဟောင်းစေတီ တစ်ဆူ ပြိုကျ၊ ဌာပ...
ပြည်နှင်ဒဏ်ခံ တရုတ်နိုင်ငံသားများ ပတ်စ်ပို့သစ်ဖြင်...
ပြိုင်ကားတစ်စင်းကဲ့သို့ မြန်နှုန်းမြင့်မားသည့် လေးဘ...
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ ကော...
ဥရောပမြောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ...
နေအိမ်ကိုပြန်လည် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆိုတေးကို သတ...
စီအိုင်ဒီမှ စစ်ဆေးပြီးသည့် ၁၀၀၀ ကျပ်တန်အတု လှည့်လည...
ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ မေမေနဲ့တကွ အမေများအားလုံးကို ဂုဏ...